That's so good, right?: August 2014
ကျွန်တော် နှစ်ရှည်လများ ရေးဖြစ်ခဲ့သော လိင်ဝတ္ထုများ၊ အချစ်ဝတ္ထုအချို့ နှင့် ဆောင်းပါးတွေအပြင် အခြားသော ဗဟုသုတရဖွယ် ပြန်လည်ဝေငှဖြစ်ခဲ့သည့် ဆောင်းပါး ၀တ္ထုများကို အွန်လိုင်းပေါ်အချိန်ပြည့်မရှိနိုင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အဆင်ပြေစေဖို့ Application (.apk) လေးတစ်ခုဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ နာမည်ကိုတော့ ကျွန်တော့်နာမည်ပဲပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါကိုတော့ နားလည်ပေးပါနော်။ Logo လေးကတော့ Cupcake (rainbow color) လေးနဲ့ပါ။
Application Name – Alex Aung
Download Link – http://www.mediafire.com/download/jdd2zggwynrjq5q/Alex_Aung.apk
နောက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေးဆောင်းပါး၊ ဘာသာရေး၊လူမှုရေးဆောင်းပါးတွေ၊ သတင်းတွေ၊ အချက်အပြုတ်၊ အလှအပ၊ ဖက်ရှင်၊ပညာရေး၊ ကဗျာစသဖြင့်မျိုးစုံကို နေ့စဉ် တစ်ခုခုတင်ဖြစ်နေတဲ့ ဘလော့ခ်လေးပါ။
သူ့ကိုတော့ ရွှေမင်းသားဆိုတဲ့ နာမည်လေးပေးဖြစ်ပါတယ်။ လိုဂိုက ပန်းသီးအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ပါ။
Application Name – Shwe Min Thar
Download Link – http://www.mediafire.com/download/vxnlog9j9uuaejy/com.shweminthar.apk.apk
(ကျွန်တော့် application လေးကို နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်လို့ဘာမှမမြင်ရသေးရင် ဒါမှမဟုတ် အသစ်တင်တဲ့ပို့စ်ကိုမြင်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အွန်လိုင်းကိုဖွင့် Menu Key လေးကိုနှိပ်ကာ Update All ဆိုတာလေးကို ထပ်မံရွေးကာ ပို့စ်တွေကို ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်လို့နော်။)
လိင်တူချစ်သူတွေကြားထဲမှာ ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသိပညာပေးမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့ ဦးဇော်ကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း
အခုတင်ဆက်မယ့် In & Out ကဏ္ဍအတွက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖို့ စီစဉ်ထားသူကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း မလှိုင်မြို့မှာနေတဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဇော်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဇော်ကြီးဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လိင်တူချစ်သူတဦးဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလည်း လိင်တူချစ်သူတဦးအဖြစ် ရပ်တည်ကာ ဥပဒေပညာနဲ့ အသက်မွေး ရပ်တည်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းအပြင် ဦးဇော်ကြီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံ လိင်တူချစ်သူများ အခွင့်အရေး ကွန်ယက်အဖွဲ့မှာလည်း ဥပဒေဆိုင်ရာ အကြံပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသူတဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လိင်တူချစ်သူတဦးအဖြစ် ဘယ်အရွယ်လောက်ကတည်းက စတင်သိရှိ လက်ခံခဲ့သလဲ။
ဦးဇော်ကြီး။ ။ ကျနော်က လေးတန်းကျောင်းသား အရွယ်လောက်ကတည်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိင်တူချင်းကိုပဲ စိတ် ဝင်စားတဲ့သူတယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။
လိင်တူချစ်သူတယောက်အဖြစ် နေထိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ် ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲ။
ဦးဇော်ကြီး။ ။ လက်ခံလိုက်တော့ ကျောင်းသားအချင်းချင်းအပေါ်မှာ ကိုယ်က သိပ်တော့ သတိမထားမိဘူး။ ဆရာ တွေကတော့ ကျနော့်အပေါ်မှာ ရယ်စရာတယောက်လိုပဲ သဘောထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က အဲဒီအပေါ် မှာ သိပ်ပြီးတော့ အရေးမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ကျနော်က အမေကို ချစ်တော့ အမေ စိတ်ဆင်းရဲမှာကို သိပ်စိုးရိမ်တယ်။ ကိုယ့်ကြောင့် အမေ စိတ်ဆင်းရဲမှာကို ကြောက်တော့ အမြဲတမ်း ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့ နေ တယ်။ ဒါပေမယ့် အမေကတော့ မပြောဘူးပေါ့လေ။ နောက်ပြီး ကျနော်က ယောက်ျားချင်း စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေ အများစု စိတ်ဝင်စားလေ့ရှိတဲ့ ဇာထိုးပန်းထိုး၊ မိတ်ကပ်ပြင် အလုပ်တွေကို စိတ်မဝင်စားဘူး။ ကျနော်က စာဖတ်တာ ဝါသနာပါတယ်။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက စာ တော်တော်ဖတ်တယ်။
ဆရာဆရာမတွေက ကိုယ့်ကို ရယ်စရာတယောက်လို သဘောထား ဆက်ဆံခဲ့တဲ့အပေါ် ဘယ်လိုမျိုး ကျော်လွှားခဲ့လဲ။
ဦးဇော်ကြီး။ ။ ကျနော်က စာတော်အောင် ကြိုးစားတယ်။ စာတော်တာက ကျန်တဲ့ အမှားအယွင်းတွေ၊ အသေးအဖွဲ့ လေးတွေကို ဖုံးသွားစေနိုင်တယ်။ ဖုံးလွှမ်းသွားတော့ ကိုယ့်ကို အခြောက်တယောက်လို့ မမြင်တော့ပဲ စာတော် တဲ့ ကျောင်းသားတယောက်လို့ မြင်လာတယ်။ နောက်ပြီး ကျနော်က အကျင့်စာရိတ္တနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစွန်း ကွက် မရှိအောင် နေတယ်။ အကျင့်စာရိတ္တကို ထိခိုက်စေတဲ့ အကြောင်းအရာအားလုံး၊ ဥပမာ ခိုးတာ၊ လိမ်တာ၊ သူများတွေအပေါ် ကလိမ်ကကျစ်ကျတာတွေ အားလုံးကို မလုပ်မိအောင် ကြိုးစားတယ်။ အဲဒီလို အခြောက် တွေအပေါ်မှာ အရုပ်ဆိုးစေမယ့် အလုပ်မျိုးတွေကို ကျနော် ဘာမှ မလုပ်ဘူး။ နောက်ပြီး ကျနော် အားကစား နယ်ပယ်မှာလည်း ပါဝင်ပြီး ထူးချွန်အောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ရေကူးအားကစားမှာဆို ကျနော် ဆုတံဆိပ်တွေ တောင် ရခဲ့ဖူးတယ်။
လိင်တူချစ်သူတဦးအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခြေအနေတွေကို ပြောပြပါဦး။
ဦးဇော်ကြီး။ ။ လိင်တူချစ်သူဆိုပြီး ခွဲခြားတယ်ဆိုတာထက် လုပ်ငန်းခွင် နယ်ပယ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ တော်ခြင်း၊ မတော်ခြင်း ကို ကြည့်ကြတယ်။ အဲဒီတော့ ကျနော်က လုပ်ငန်းခွင်မှာ ရှေ့နေဆို ရှေ့နေပေါ့၊ တော်အောင် ကြိုးစားတယ်။ ကျွမ်းကျင်အောင် လုပ်တယ်။ အဲဒါလေးတွေက ကိုယ့်ကို ကာဗာဖြစ်စေတယ်။ ရှိတာတော့ ရှိမှာပေါ့လေ။ အခြောက်ပုံစံဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ပြောကြ၊ ဆိုကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်လာတာ တို့၊ အကြံပေးချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လာလို့ ရှိရင်တော့ ကိုယ့်ဖက်က ကျွမ်းကျင်နေအောင် ပြင်ထားတယ်။ ကိုယ့် ကို အထင်မသေးရဲဘူး။
လိင်တူချစ်သူဖြစ်လို့ ဖိအားတော့ ရှိတာပေါ့။ ကျနော်နဲ့ ထိတွေ့နေတဲ့ ယောက်ျားတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် ကျနော်က သူတို့ထက် နည်းနည်းမြင့်နေတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ဆီက ကိုယ့်အပေါ် အနိုင်ကျင့်စော်ကားလာမှာ၊ လှောင်ပြောင်မှာ၊ သရော်မှာတို့ကို မပူရဘူး။ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဆိုတာ ကိုယ့်ကြောင့် ဖြစ်လာတာ။ ခွဲခြားနှိမ့်ချ ဆက်ဆံမှုတွေဆိုတာ ကိုယ်မကောင်းရင် ဖြစ်မှာပဲ။ ကိုယ် ကောင်းရင် ပြဿနာ မရှိဘူး။ အခု ကျနော် ရုံးတက်ရင် တိုက်ပုံအင်္ကျီအနက်လေးနဲ့ ရုံးတက်တယ်။ ဘယ်သူ့မှ မစော်ကားရဲဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ ဘော်လီကြီးတွေ ဝတ်ပြီး တက်လာမယ်ဆိုရင်တော့...........။ အဲဒီ Education ကို ကျနော်က နက်နက်နဲနဲကို သဘောပေါက်ထားတယ်။ စဉ်းစားကြည့်လေ။ ရှေ့နေကြီးက မိန်းမပုံကြီးကို ဝတ်သွားမယ်ဆိုရင် ဘာညာဆိုပြီး ဖြစ်လာမယ်။ လူတွေက ကိုယ့်ကို အထင်မကြီးလာနိုင်တော့ဘူး။ အထင်မကြီးရင်တောင် မယုံကြည်နိုင်ဘူး။ တကယ်လို့ ကိုယ်သာ သင့်တော်တဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမျိုးကို ပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ရှိန်သွား မှာပဲ။
ပညာရေးက သိပ်အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောသွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တပိုင်းတစနဲ့ ကျောင်းထွက်ခဲ့ရတဲ့ သူတွေ ရှိကြတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဆိုတာက အထူးသဖြင့် ကျောင်းထဲ ကျောင်းသားတွေ အချင်းချင်းကြား ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေ၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့ ခွဲခြားတဲ့ အပြုအမှုတွေ အပါအဝင်ပေါ့။ အဲဒီအပေါ်မှာကော ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဦးဇော်ကြီး။ ။ လိင်ကွဲချင်း စိတ်ဝင်စားသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လိင်တူချင်း စိတ်ဝင်စားသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျားကျား မမ လူသားတိုင်းရဲ့ ရှင်သန်မှုမှာ ပထမဦးဆုံး အရေးကြီးတဲ့အချက်က မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ ဆိုင်တယ်။ ဒုတိယအချက်က ကိုယ်တိုင် လေ့လာတတ်တဲ့ လေ့လာနိုင်စွမ်းအားနဲ့ ဆိုင်တယ်။ တတိယအချက်က ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆိုင်တယ်။ အဲတော့ အခု ခင်ဗျားပြောတဲ့အချက်က ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဆိုင်နေတယ်။ ကိုယ်က ပထမဦးဆုံး နှစ်ချက်မှာ အားကောင်းနေတယ်ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့ဟာကို သိပ်ပြီး ခေါင်းထဲမှာ ထည့်မစဉ်းစားစေချင်ဘူး။ ကိုယ်က ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုတ်ခတ်မှုကို နာပြီး အရေးတယူ လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ တက်စရာရှိတဲ့ ခြေလှမ်းတွေဟာ အကုန် ပျက်သွားလိမ့်မယ်။ နောက်တခါ သင်ကြားလေ့လာမှုဆိုတာက ကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီး ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားရတာ။ အဲတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုတ်ခတ်မှုအောက်မှာ လည်စင်းခံနေမယ်ဆိုရင် ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါက ပညာရေးတင် ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ စီးပွားရေးကော၊ လူမှုရေးကော အကုန်လုံးပဲ။ ဒီတော့ ကျောင်းမနေဘူး၊ နေတယ်ဆိုတာက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်လိုက်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကလေးရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အချင်းချင်း ပတ်ဝန်းကျင်၊ သူငယ်ချင်း၊ မိဘ၊ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒီ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဖိနှိပ်မှုဒဏ်တွေကို ခံရတယ်ဆိုရင် အဲဒီလူက နစ်နာတာပါပဲ။ သို့သော် အဲဒါတွေက လိင်တူချစ်သူတွေမှ မဟုတ်ဘူး။ တခြား လိင်ကွဲချစ်သူ မိန်းမ၊ ယောက်ျားတွေမှာလည်း ရှိပါတယ်။ သို့သော် အခြောက်တွေမို့လို့ အထူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကတော့ နည်းနည်းတော့ ထိလွယ်ရှလွယ်တယ်။ (၁၅) နှစ် ကျော်ကျော် ကျောင်းပြီးတဲ့အထိ ကျောင်းတက်စဉ်ကာလမှာ ကျနော်တို့လည်း ကြုံခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် တို့ကတော့ ဒီဟာတွေတွေဆို ဖြုံကို မဖြုံဘူး။
ဥပဒေဆိုင်ရာ နယ်ပယ်က ပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ လိင်တူချစ်သူတွေကိုရည်ရွယ်ပြီး ဖိနှိပ်ပြဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၇ ဆိုတာ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီ ပုဒ်မ ၃၇၇ အကြောင်းကို ပြောပြပါဦး။
ဦးဇော်ကြီး။ ။ ဥပဒေဆိုတာက တိုင်းပြည်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကို ငြိမ်းချမ်းအောင်၊ လုံခြုံအောင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာလို့ ယူဆတယ်။ ကျနော်က ဒီဥပဒေပညာကို အင်မတန် မြတ်နိုးတယ်။ လေးစားတယ်။ ဥပဒေရဲ့အောက်မှာ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် တတန်းစားတည်း ရှိနေဖို့ အရေးကြီးတယ်။ သို့သော် ဒီနေရာမှာ ဖိနှိပ်တယ်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကိုတော့ ကျနော့်အနေနဲ့ သိပ်တော့ သဘောမတူလှဘူး။ ဥပဒေထဲမှာ ရှိနေမယ်ဆိုရင် ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဥပဒေဟာ ဥပဒေပါပဲ။ တကယ် စဉ်းစားမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဥပဒေဟာ အားလုံးအတွက်ပါ။ ခင်ဗျားအတွက်လည်း ဒီဥပဒေ၊ ကျနော့်အတွက်လည်း ဒီဥပဒေပဲလေ။ ဒီနေရာမှာ ကျနော်ဆိုလိုချင်တာက သိပ်ဖိနှိပ်တယ်လို့တော့ မဆိုလိုဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီ ပုဒ်မ ၃၇၇ ကတော့ မလိုအပ်ဘူးလို့ ယူဆတယ်။ အဲဒါကို ထပ်ပြောမယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၃၇၇ ထဲမှာ ဓမ္မတာနဲ့ ဆန့်ကျင်သော ပြစ်မှု (Unnatural Offensive) ဆိုတာကို ပြောထားတယ်။ ဓမ္မတာနဲ့ ဆန့်ကျင်သော ပြစ်မှုဆိုတဲ့အခါမှာ ဓမ္မတာနဲ့ ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကို Definition (အဓိပ္ပါယ်) မဖွင့်ဘူး။ ဘယ်လိုဟာကို ဓမ္မတာနဲ့ ဆန့်ကျင်တာလဲ။ ဥပမာအားဖြင့် Anal Sex (စအို ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ဆိုလို့ရှိရင် ဓမ္မတာနဲ့ ဆန့်ကျင်တာလား။ Oral Sex (ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်း) ဆိုလို့ ရှိရင် ဓမ္မတာနဲ့ ဆန့်ကျင်တာလား။ ဒါမှမဟုတ်ရင် Masturbation (တကိုယ်ရေ အာသာဖြေခြင်း) လုပ်တာကို ဓမ္မတာနဲ့ ဆန့်ကျင်တာလား။ ဒါမှမဟုတ် ယောက်ျားချင်း ပူးကပ်ပွတ်သပ်နေတာကို ဓမ္မတာနဲ့ ဆန့်ကျင်တာလား ဆိုတဲ့ဟာကို မဖွင့်ဆိုထားဘူး။ Definition မရှိဘူး။ မရှိတဲ့အခါကျတော့ တခုခု တစုံတရာကို တွေ့လိုက်တယ် ဆိုရင် ဒါဟာ ဓမ္မတာနဲ့ ဆန့်ကျင်တယ်လို့ သမုတ်လိုက်တယ်။ ဓမ္မတာနဲ့ ဆန့်ကျင်တယ် ဆိုတဲ့အထဲမှာ နောက် တခါ ထူးခြားချက်တခုက တိရစ္ဆာန်နဲ့ လူသား consummation လုပ်လို့ရှိရင် ဓမ္မတာနဲ့ ဆန့်ကျင်တယ်လို့ တပ် တယ်။ တိရစ္ဆာန်နဲ့ consummation ဆိုတာ လက်ခံသည်ဖြစ်စေ၊ လက်မခံသည်ဖြစ်စေ ဓမ္မတာနဲ့ ဆန့်ကျင်တယ်။
ဓမ္မတာနဲ့ ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စက ၃၇၇ လို့ သတ်မှတ်ထားပေမယ့်လို့ အဲဒီမှာ သက်သေခံ အထောက်အထားတွေ ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ကတော့ မလွယ်ဘူး။ ဥပမာအနေနဲ့ ပြောပြရမယ်ဆိုရင် လိင်တူ ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာ လူကြားထဲမှာ လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ချောက်ကြိုချောင်ကြားထဲမှာ လုပ်ကြတာ။ ချောက် ကြိုချောင်ကြားထဲမှာ လုပ်တဲ့ကိစ္စတခုက သက်သေခံ အထောက်အထား ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုတာ မလွယ်ဘူး။ အကယ်၍ မိလာပြီဆိုရင် အမြန်ဆုံး ဆေးစစ်ရမယ်။ နောက်ပြီး ဆက်ဆံခံထားရတဲ့ အရာ (စအို) ကိုလည်း ဆေးစစ်ရမယ်။ ဆေးစစ်လိုက်လို့ စအိုမှာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ ရှိတယ်၊ သုတ်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုရင်၊ စုတ်ပြဲ ဒဏ်ရာတွေ ရှိတယ်၊ ယောင်ယမ်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ သေချာသွားပြီပေါ့။ တဖက်မှာလည်း ဆက်ဆံသူရဲ့ လိင်တံမှာ လတ်တလော သုတ်လွှတ်ထားတာတို့၊ ပွန်းပဲ့တာတို့၊ စုတ်ပြတ်သပ်နေတာတို့ ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒါကတော့ မြောက်သွားပြီ။ မြောက်တဲ့အခါမှာ ဘယ်မှာ သွားပြီး အဓိကကျသလဲဆိုတော့ အဲဒီဆေးစာက ၃၇၇ မြောက်ခြင်း၊ မမြောက်ခြင်းမှာ အရေးကြီးတယ်။ အမှုတခုကို ပြင်ဆင်ပြီး တရားစွဲဖို့ လုပ်တဲ့အခါကျတော့ အဲဒီလိုမျိုး အထောက်အထားတွေ ရဖို့ဆိုတာက အင်မတန် ခဲယဉ်းတယ်။ ဆိုတော့ ၃၇၇ ဟာ သိပ်ပြီးတော့ ပေါ်ပြူလာ မဖြစ်ပါဘူး။ ရှေ့နေလောကမှာလည်း ပေါ်ပြူလာ မဖြစ်ဘူး။ စိတ်လည်း သိပ်မဝင်စားကြဘူး။ ဖြစ် လေ့ဖြစ်ထလည်း သိပ်မရှိဘူး။
တချို့ကလည်း ပုဒ်မ (၃၇၇)ဟာ လိင်တူချစ်သူတွေအပေါ် သီးသန့်ရည်ရွယ်ပြီး ဖိနှိပ်ထားသလို ဖြစ်နေတဲ့အတွက် လုံးဝဖျက်သိမ်းပေးဖို့အထိ ပြောနေတာ ရှိသလို တချို့ကလည်း ဒီဥပဒေကို တိကျတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မျိုးတွေနဲ့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်သင့်တယ်ဆိုပြီး ထောက်ပြနေကြတာ ရှိတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာရော ဘယ်လိုမျိုး ထင်မြင်ယူဆလဲ။
ဦးဇော်ကြီး။ ။ ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ ပုဒ်မ ၃၇၇ ကြီးတခုလုံးကို လုံးဝဖျက်သိမ်းပစ်လိုက်မယ့်အစား အဲဒီ ဥပဒေ အောက်မှာ တိကျတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်လေးတွေကို ထည့်သွင်းချင်တယ်။ တိကျတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက် ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဓမ္မတာနဲ့ ဆန့်ကျင်သောဆိုတာ ဘာလဲ အဲလိုမျိုးတွေပေါ့။ အခုက ဒီဥပဒေမှာ တိကျတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေ မရှိတော့ မရှင်းလင်းဘူး။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ပြတ်ပြတ်သားသား မရှိရင် ဒီဥပဒေက ယေဘုယျဆန်သွားတယ်။ ယေဘုယျဆန်သွားရင် Definite (တိကျမှု) မဖြစ်ဘူး။ Definite မဖြစ်တဲ့ ဥပဒေ ဆိုတော့ ရမ်းပြီး သုံးထားသလို ဖြစ်နေတယ်။
ပုဒ်မ ၃၇၇ ကို လုံးဝဖျက်သိမ်းပစ်လိုက်တာထက် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ပိုမိုတိကျအောင် လုပ်ဆောင်တာက ပိုကောင်းတယ်လို့ ယူဆတယ်ပေါ့။
ဦးဇော်ကြီး။ ။ ဟုတ်တယ်။ တိကျတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို လိုချင်တယ်။ ဥပမာကွာ- ပုဒ်မ ၃၇၇ လို့သာ ပြောနေ တာပါ။ ယောက်ျားချင်းဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ မပါဘူး။ Male to Male ဆိုတာ မပါဘူး။ Male to Animal ဆိုတာ မပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ် Female to Female ဆိုတာမျိုးလည်း မပါဘူး။ ကိုယ်ကတော့ ပြောနေတာပဲ။ ပုဒ်မ ၃၇၇ ဘာညာ ဆိုပြီး။ ဟုတ်တယ်လေ။ ဓမ္မတာနဲ့ ဆန့်ကျင်သော ဆိုတဲ့အောက်မှာ သိမ်းကြုံးပြီးတော့ အကုန်လုံးက ပါသွားမှာလေ။ နောက်ပြီး မြန်မာပြည်တဝှမ်း မြို့ကြီးတွေမှာ လိင်တူချင်း ပေါ်ပေါ်တင်တင် လင်မယားလုပ်ပြီး နေနေကြတဲ့သူတွေ အများကြီး။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း တခြားသူတွေကို မိတ်ဆက် ပေးတတ်ကြတယ်။ ဒါ ကျမ လင်၊ ဒါ ကျမ ယောက်ျားဆိုပြီး။ အဲလိုမျိုးတွေ ရှိနေပေမယ့်လည်း ဥပဒေအရ ပြဌာန်းထားသလိုလို၊ မပြဌာန်းထားသလိုလိုမျိုး။ သူတို့တွေကတော့ တရားဝင် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသလိုမျိုးနဲ့ တကယ့်ကိုပဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အဲလို နေနေကြတာပဲ။ မိန်းမလို ဝတ်ရမယ်၊ မဝတ်ရဘူးဆိုတာမျိုးလည်း မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် လူတွေကတော့ အဲသလို လုပ်နေကြတာပဲ။ အဲဒါကို ပုဒ်မ ၃၇၇ အရလည်း လုပ်ဆောင်တာမျိုး မရှိဘူး။ အဲဒီတော့ ကျနော့် အနေနဲ့ကတော့ ဒီကိစ္စအပေါ်မှာ သိပ်ပြီးလည်း မတွန်းစေချင်ဘူး။
ပုဒ်မ (၃၇၇) နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှုတွေကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးလား။
ဦးဇော်ကြီး။ ။ ဦးတို့မြို့မှာ ပုဒ်မ ၃၇၇ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Case တခုတော့ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီ Case တခုကလည်း အသက် (၂)နှစ်၊ (၃)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ အမျိုးသမီးအင်္ဂါကို တရားခံဖြစ်တဲ့သူက လက်ညှိုးနဲ့ ထိုးပြီး ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ အမှုက ကြီးတော့ ဘယ်လိုပုဒ်မမျိုးနဲ့ တပ်ပြီး တရားစွဲမလဲဆိုတော့ အဲဒါကို ပုဒ်မ ၃၇၇ နဲ့ တပ်ပြီး တရားခွင်ကို ပို့ခဲ့တယ်။ ဒါပဲ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အဲတော့ ဦးရဲ့ သက်တမ်းတလျှောက်မှာ ဦးရဲ့ ကျင်လည်ရာ နယ်ထဲမှာပေါ့နော်… ပုဒ်မ ၃၇၇ နဲ့ တရားစွဲခဲ့တာဆိုလို့ အဲဒီကိစ္စတခုပဲ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။
လိင်တူချစ်သူ စုံတွဲတတွဲကို ပုဒ်မ ၃၇၇ နဲ့ တရားစွဲဆိုခံရမယ်ဆိုရင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေက ဘာတွေ ရှိမလဲ။
ဦးဇော်ကြီး။ ။ ပထမဦးဆုံး အရေးကြီးတဲ့ အချက်ကတော့ သတင်းတိုင်ချက်ပေါ့။ ပြီးရင် ရဲကနေ ဖြောင့်ချက်တွေ ယူမယ်။ အဲဒီ သတင်းတိုင်ချက်နဲ့ ဖြောင့်ချက်တွေ ယူနေတဲ့ကြားထဲမှာ ဆေးစစ်ချက်တွေ ယူရမယ်။ ဆေးစစ် တဲ့အခါမှာ လိင်ဆက်ဆံထားသော ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ၊ လိင်ဆက်ဆံထားတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ပုံစံတွေ၊ လက္ခဏာတွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင် ပုဒ်မ ၃၇၇ နဲ့ အရေးယူလို့ ရတယ်။ အပေါ်မှာလည်း အတိုင်းအတာတခုအထိ ပြောခဲ့ပြီးပြီ။ လိင်ဆက်ဆံထားတယ်ဆိုတာကို အခိုင်အမာ ပြသနိုင်တဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ သက်သေခံ အထောက်အထားတွေ ရှိရင် အဲဒီဟာနဲ့ စွဲလို့ ရတယ်။
ပုဒ်မ ၃၇၇ အပြင် လိင်တူချစ်သူတွေကို ဒုက္ခပေး ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ တခြား ဥပဒေတွေလည်း ရှိသေးတယ်လို့ ပြောနေကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ကော......။
ဦးဇော်ကြီး။ ။ လိင်တူချစ်သူတွေ ဆိုတာထက် များသောအားဖြင့် မိန်းမလျာတွေက ချောင်ခိုမယ်၊ အမှောင်ခိုမယ်၊ ပုန်းလျိုးကွယ်လျိုး နေမယ်ဆိုရင် ရဲတွေက အရေးယူမှာပဲ။ အဲဒီဟာကတော့ ရှိတယ်။ ဒါကလည်း ရဲတွေဖက် ကနေ လိုက်ပြီး ကျနော် ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရဲတွေက သူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ လုပ်တာ။ မိန်းမလျာကြောင့်မို့လို့ လုပ်တာ မဟုတ်ဘူး။ တခြားတယောက်ယောက်က မိန်းမဖြစ်ဖြစ်၊ ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ် ခိုးလိမ့်မယ်၊ ယက်လိမ့်မယ်၊ တခုခုကို လုပ်လိမ့်မယ်၊ အဲဒီအတွက် မှောင်ရိပ် ခိုနေတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ရဲတွေက အရေးယူလိမ့်မယ်။ အခြောက်မို့လို့ အရေးယူတယ် ဆိုတာကတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော့်ပတ်ဝန်းကျင် မှာ ဒီကိစ္စမျိုးတွေကို ကြားနေရတာပဲ။ ဘယ်မိန်းမလျာက ဘယ်လို အရေးယူခံထားရတယ်ဆိုတာ။ အဲဒီတော့ အခုနက ပြောသလိုပဲ ရဲ Act နဲ့ အရေးယူတာလောက်ပဲ ရှိတယ်။ (၄၇) တို့ (၃၅) တို့ ဘာညာဆိုတာလောက်ပဲ ရှိတယ်။ အဲဒီပုဒ်မတွေက တကယ့်တကယ် ပြောရမယ်ဆိုရင် မပြောပလောက်ပါဘူး။ ထင်လည်း မထင်ရှားဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း ထောင်ဒဏ် (၇) ရက်ပဲ ချလို့ ရတယ်။ ဒီလိုမျိုးလေးလောက်ပဲ ရှိတယ်။
ဦးဇော်ကြီး။ ။ ရုံးမှာ တရားစွဲချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ရဲရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာ ရှိတယ်။ နောက်တခါ အဲဒီရဲရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ထဲမှာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဆိုတာတွေလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီနှစ်ခုကို ပေါင်းပြီးမှ အမှုတခုကို တရားရုံးပို့ပြီး တရားစွဲလို့ ရတာ။ အဲလို ရှိတယ်။ အဲတော့ အခုနက ပြောတဲ့ ရဲအက်ဒ် (၄၇) တို့ ဘာတို့ဆိုတာက ရှင်းရှင်း ပြောရမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ပြစ်မှုမမြောက်သေးဘူး၊ မသင်္ကာတာနဲ့ ခေါ်စစ်တာ။ ပြစ်မှုမြောက်တယ် ဆိုတာက တကယ် ထိထိရောက်ရောက် ကျူးလွန်တာ။ ပြစ်မှု မမြောက်သေးရင် ရာဇဝတ်မှုတခုကို ကျူးလွန်ရန် ကြံရွယ်ချက်နဲ့ တင်တယ်။ အဲဒါ ရှိတယ်။
ပြစ်မှုလုံးလုံးမြောက်နေအောင် ကျူးလွန်တာမျိုးလည်း ရှိတယ်။ မမြောက်သေးလို့ရှိရင် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၅၁၁ ကကျတော့ ကြံစည်တာပေါ့။ ကြံစည်တာပဲ ရှိတယ်။ ကြံစည်တာနဲ့ ပြစ်မှုမြောက်တယ် ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကြံစည်တယ်ဆိုတာက အနာဂတ်ကိစ္စ ပါလာပြီ။ ကျူးလွန်တယ်ဆိုတာက တကယ့်ကို ထိထိရောက် ရောက် ကျူးလွန်တာ။
ဒါပေမယ့် လိင်တူချစ်သူတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော်တို့ဘက်မှာ ဖြစ်နေတာက ခိုးတာတို့၊ ဘာတို့ပဲ ရှိတယ်။ ၃၇၇ နဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ မရှိဘူး။ အခုနက ပြောခဲ့တဲ့ ပုဒ်မ ၄၇ မှောင်ရိပ်ခိုလို့ မသင်္ကာတာနဲ့ ဆွဲစိတာတို့လောက်ပဲ ရှိတယ်။
ပုဒ်မ ၅၄ တို့ ဘာတို့ ဆိုတာကကော
ဦးဇော်ကြီး။ ။ ပုဒ်မ ၅၄ ဆိုတာက ရဲကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးထားတာ။ ဥပမာ ပြစ်မှုတော့ မမြောက်သေးပေမယ့် မြောက် တော့မယ် ဆိုတာနဲ့ ရဲတွေ ဘာမှ မလုပ်ပဲနဲ့ ရပ်ကြည့်ဆိုတာမျိုး မဖြစ်အောင် သူ (ပုဒ်မ ၅၄) က လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးထားတာ။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးနော်။ ရဲ အက်ဒ် မဟုတ်ဘူး။ ပုဒ်မ ၅၄ တို့ ၅၃ တို့ဆိုတာတွေက ရဲကို လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပေးထားတာ။ ရဲအနေနဲ့ လုပ်နိုင်တယ်။ သူ မသင်္ကာဘူးဆိုတာနဲ့ ဆွဲစိနိုင်တယ်။ အဲဒါက လိင်တူ ချစ်သူတွေကိုမှ မဟုတ်ဘူး။ မိန်းမတွေကိုဆိုရင်လည်း ပြည့်တန်ဆာ လုပ်စားမယ်ဆိုရင် သူ့ကို ဖမ်းပြီး ဆွဲစိနိုင် တယ်။ ယောက်ျားတွေကို ဆိုရင်လည်း ခိုးမယ်ဆိုရင် အဲဒါနဲ့ ဆွဲစိလို့ ရတယ်။ ရဲတွေက ပြစ်မှုဖြစ်တဲ့ အထိကို မစောင့်နိုင်ဘူး။ ထိန်းသိမ်းမှုတွေကို လုပ်တဲ့သဘောမျိုး….။ ဥပမာ လူတယောက်က မူးပြီး ဓားနဲ့ ရမ်းကားတယ်။ အဲဒီမှာ ခုတ်တဲ့၊ ထစ်တဲ့ အခြေအနေထိ မစောင့်ပဲ ရဲအနေနဲ့ ထိန်းတာမျိုး။ အဲဒီမှာ ဥပဒေတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ခြေချုပ်တို့၊ ဘာတို့….။
ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေမှာတော့ Definition (အဓိပ္ပါယ်) ဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမပဲ သုံးတယ်။ လိင်တူ၊ လိင်ကွဲဆိုတာ မပါဘူး။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေနဲ့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဆိုတာနဲ့ကလည်း ကွာတယ်နော်။ ကျင့်ထုံးဆိုတာက ပြစ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဆိုတာက ပြစ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒါကတော့ ဒါမျိုးဆိုရင် ကျူးလွန်ရာ ရောက်တယ်၊ မရောက်ဘူးဆိုတာကို ဖော်ပြထားတယ်။
အဲဒီဥပဒေတွေက လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ ဘဝအပေါ် ဘယ်လို လွှမ်းမိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေစေလဲ။
ဦးဇော်ကြီး။ ။ အဲဒီဥပဒေတွေကြောင့် လိင်တူချစ်သူတွေအပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးသက်ရောက်နေစေတယ်၊ ပြဿနာတွေ တက်နေတယ်လို့တော့ မယူဆဘူး။ အဲဒီဥပဒေတွေမှာလည်း လိင်တူချစ်သူတွေကိုဆို အရေးယူရမယ် ဘာညာ ဆိုတာ မပါဘူး။ သို့သော် အခုနက ပြောခဲ့သလို ကိုးရိုကားယားမျိုးတွေ နေတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒါတွေနဲ့ ဆော် လိုက်တော့ ထိရော။
အထက်က ပြောခဲ့တဲ့ ဥပဒေပုဒ်မတွေနဲ့ အပြစ်ပေး အရေးယူမှုတွေ ခံနေကြရတဲ့အပေါ်မှာ ဘယ်လို ပြောချင်လဲ။
ဦးဇော်ကြီး။ ။ ဥပဒေကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ သူတယောက်ဖက်ကနေ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဥပဒေနဲ့ အမှန်တ ကယ် ငြိစွန်းမယ်၊ သက်သေခံ အထောက်အထားတွေနဲ့ ခိုင်လုံပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်တော့ ပြစ်ဒဏ်ပေးတာကို ကြိုက်ပါတယ်။ သို့သော် ခိုင်လုံပြည့်စုံမှု မရှိပဲနဲ့ အလကားသက်သက် အခြောက်မို့လို့ မုန်းတီးပြီး နှိပ်စက်တာ၊ ညှင်းပမ်းတာ၊ ပြစ်ဒဏ်ချတာ ဆိုရင်တော့ ကျနော့်အနေနဲ့ လက်မခံနိုင်ဘူး။ အခြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ် တဦးတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အေးချမ်းနေတဲ့ အခြေအနေတခုမှာ ဒီလိုမျိုး အကြောင်းမဲ့၊ အကျိုးမဲ့ အရေးယူတာ မျိုးကို မလိုလားဘူး။ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။
တချို့ရဲတွေက သူတို့လုပ်ပိုင်ခွင့် ဘောင်ထဲကနေပြီး ညအမှောင်ထဲမှာ သူငယ်လျှမ်းနေကြတဲ့ သူတွေကို ခြိမ်းခြောက် ငွေညှစ်တာမျိုးတွေ လုပ်လေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာကော ဘယ်လိုမျိုး ပြောချင်လဲ။
ဦးဇော်ကြီး။ ။ ရဲတွေအနေနဲ့ ဒီလိုမျိုးတွေကို မလုပ်သင့်ဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ ရဲတွေအနေနဲ့ အစိုးရက နည်းနည်း ကြပ်မတ်လာတော့ ဒီလိုမျိုး လုပ်ရပ်တွေကို သိပ်မလုပ်ကြတော့ဘူး။ အရင်တုန်းကတော့ သူတို့တွေအနေနဲ့ ပိုက်ဆံညှစ်တာတွေကို လုပ်လေ့ရှိတတ်ကြတယ်။ လုပ်တယ်ဆိုတာကလည်း သူတို့ရဲ့ လစာငွေကြေး နည်းပါးမှု ကြောင့်လည်း ဖြစ်မယ်။ သူတို့ရဲ့လစာနဲ့ မိသားစုဝမ်းရေးကို မဖြေရှင်းနိုင်တော့တာက ဒီလိုမျိုး အဂတိ လိုက်စား မှုတွေကို ဖြစ်လာစေတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရဲတွေမှာက practice ရှိတယ်။ အရမ်း မလုပ်ကြဘူး။ သူတို့တွေက လူတယောက်ကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ သိတယ်။
အဲဒီ ဥပဒေတွေကို ဥပဒေပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုထင်မြင်ချက်ပေးလိုပါသလဲ။
ဦးဇော်ကြီး။ ။ အဲဒီ ၃၇၇ ထဲမှာ လိင်တူချစ်သူဆိုတဲ့ Definition တော့ မပါဘူး။ သို့သော် အကယ်၍ ၃၇၇ သာ မရှိတော့ရင် မိန်းမလျာတွေကို သွားချင်ရာ သွား၊ လုပ်ချင်ရာ လုပ် သဘောမျိုးနဲ့ လွှတ်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွား မှာပေါ့။ လွတ်လပ်ကုန်မှာပေါ့။ သူတို့တွေက (လိင်တူချစ်သူတွေက) ဒီဥပဒေမရှိခြင်းကို အခွင့်ကောင်း ယူလာ ကြမှာ။ ကျနော် ပုဒ်မ ၃၇၇ ကို နားလည်ထားတာက …… HIV/ AIDS ရောဂါ ပြန့်ပွားမှာကိုတော့ လက်မခံနိုင် ဘူး။
အဲဒါက Safe Sex နဲ့ အသိပညာ အားနည်းလို့ဆိုတာက ပိုမမှန်နိုင်ဘူးလား။ မြန်မာပြည်မှာ ခုခံအား ကျဆင်းမှု ရောဂါ ပြန့်ပွားမှုနှုန်း မြင့်မားနေတယ်ဆိုတာက ၃၇၇ နဲ့တော့ တိုက်ရိုက် မဆိုင်ဘူးလို့ ယူဆမိတယ်။
ဦးဇော်ကြီး။ ။ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် Safe Sex ကို လူတိုင်း နားမလည်ကြဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံက လိင်တူချစ်သူတွေ အနေနဲ့လည်း ကျကျနနနဲ့ စနစ်တကျ လိင်ဆက်ဆံတတ်တာမျိုး သိပ်မရှိဘူး။ ပြီးလွယ်စီးလွယ်ပဲ။ တောင်ပြုံး မှာဆို ကြောက်စရာကြီး….။ အခု မြန်မာပြည်မှာက HIV/ AIDS ရောဂါ ပြန့်ပွားမှုနှုန်း သိပ်များနေပြီ။ ဒီနေရာမှာ ပုဒ်မ ၃၇၇ ဖျက်သိမ်းရေးကို ကျနော့်အနေနဲ့ ပြောလို့ရနိုင်ပေမယ့် ဒီဖက်က ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ ပြန့်ပွားမှု နှုန်းရဲ့ အန္တရာယ်ကို သူတို့က ကြည့်နေမှာ။ အခုနက စကားအတိုင်း ၃၇၇ ကို ဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့ ဒီဖက်မှာ ရောဂါပြန့်ပွားမှုနှုန်းက တက်ပြီ။ အဲတော့ နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်တဲ့ လူကြီးတွေရဲ့ မျက်စိထဲမှာ ဒီလို နှုန်းထားတွေကို ကြည့်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းမှ ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ ပြောခဲ့ကြတဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုမျိုး အပိုင်းတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင် လိင်တူချစ်သူတွေအပေါ် ကူညီရာ ရောက်နိုင်မလဲ။
ဦးဇော်ကြီး။ ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ လိင်တူချစ်သူတွေကြားမှာ ဥပဒေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေ အပေါ် အသိပညာပေးမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် အရမ်းကောင်းမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက် ပြီး ပညာရေး… ဒါကလည်း အရေးကြီးတယ်။ အဲဒီအပိုင်းကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားဖို့ လိုမယ်။ ပညာရေးမြင့်မှ အခွင့်အရေး အကြောင်းတွေကို နားလည်လာနိုင်ပြီး တောင်းဆိုတတ်လာမှာ…။ အခုက အဲဒီ အဆင့်ထိ မတက်နိုင်သေးဘူး။ ပညာရေးက နိမ့်နေသေးတယ်။ ပညာရေး နိမ့်ကျတယ်ဆိုတာကတော့ လိင်တူ ချစ်သူတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးပါပဲ။
တိုင်းပြည်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေထဲမှာ လိင်တူချစ်သူတွေအတွက် လိင်စိတ်ခံယူမှု မရွေးဆိုတဲ့ အပိုဒ်လေးကို ထည့်သွင်းဖို့ တောင်းဆိုသင့်တယ်လို့ ပြောလာတဲ့အပေါ်မှာကော ဘယ်လိုမြင်သလဲ။
ဦးဇော်ကြီး။ ။ ပြောတာကတော့ လွယ်တယ်။ အဲဒါက လွှတ်တော်နဲ့ သက်ဆိုင်နေပြီ။ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသော အမတ်တွေ က ဒီဟာကို နားလည်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ ဥပမာ ကျနော် လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်နေလို့ ဒီဟာကို အဆိုတင်သွင်းတယ်။ ဒီဟာကို ကျနော်တယောက်တည်း ပြောနေလို့ မရပါဘူး။ အခြား ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသော အမတ်တွေက ဒီဟာကို နားလည်လက်ခံပြီး ထောက်ခံလာအောင် လုပ်ယူရမယ်။ တခြားအမတ်တွေက ကိုယ့်အဆိုကို ထောက်ခံလာအောင် လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့ အားလုံးက ပြန့်ကျဲမနေပဲ တသံတည်း ထွက်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြရမယ်။ ကိုယ့်အသံကို ထိထိရောက်ရောက် ဖြစ်စေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ဆောင်တတ်ဖို့ လိုမယ်။
Posted by Alex Aung at 1:20 PM No comments:
သောကြာနေ့ သင်္ချာအတန်းချိန်ဝယ် စာသင်ခုံတွေရဲ့နောက်ဆုံးတန်းမှာ တိတ်တဆိတ် ထိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာ ရစ်တာကိုသိပ်မခံရချင် တာကြောင့်ရယ် သိပ်ပြီးစိတ်မ၀င်စားတဲ့ သင်ခန်းစာဖြစ်တာကြောင့်လဲပါမယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ တစ်ခါဖူးမျှ မခံစားဖူးတဲ့ အချစ်စိတ်ကို စတင်တွေးတောစေခဲ့တဲ့ နေမျိုးအောင်ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက် အကြောင်း ဆန်းစစ်တွေးဆချင်တာကြောင့်လည်း ပါမှာပေါ့လေ။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ သူ့အသွင်အပြင်က တစ်ပါးသူကို ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ ၀တ်ချင်တာဝတ်ပေမယ့် ဖက်ရှင်တော့ကျပါတယ်။ ဆံပင်ပျော့ပျော့လေးတွေက မရှည်တရှည် ဝေ့၀ဲလို့ လမ်းလျှောက်များသွားရင်လေ။ သူ့ခန္ဓကိုယ်ကလည်း ပိန်တယ်ထင်ရပေမယ့် တကယ်ကြံ့ခိုင်သော ကြွက်သားများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ ရယ်မြူးနေဟန်သူ့မျက်ဝန်းတွေကလည်း သူ့အကြောင်းကို ရင်ဘတ်ထဲထည့်ထား လောက်အောင်စွမ်းပါတယ်။ ပထမနှစ် Freshman ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ အတန်းကကျောင်းသားဘောလုံးအသင်းမှာ ကပ္ပတိန်လုပ်ခဲ့တာ အခုအချိန်ထိပါပဲ။ နက်မှောင်သော ဆံနွယ်တွေ၊ မျက်ဝန်းနက်နက်တွေ…ကြံ့ခိုင်သော ခန္ဓာကိုယ်ရယ် အမြဲလိုလို လန်းဆန်းတက်ကြွနေတော့တာ။ ကျွန်တော်သည်လည်း ပိန်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ဆိုပေမဲ့ သူ့လိုကြွက်သားတွေ နဲ့ကြံ့ခိုင်တဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး အသားဖြူတော့ ပိုးဟပ်ဖြူလို့ခေါ်ကြသလိုလေးပါ။
သူ့ကိုချစ်စိတ်ဝင်မိခဲ့တာက လူပျိုဖော်ဝင်ပြီးစ ၈တန်းနှစ်လောက်ကတည်းကပါဆိုတော့ သူ့ကိုအကြွင်းမဲ့ နှစ်သက်စွဲလမ်း ခြင်းနဲ့ နေထိုင်ခဲ့တာ ငါးနှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်။ သူ့အကြောင်းပြောပြရရင် အဦးဆုံးသတိထားမိမှာက ကြင်နာတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက် အဲ…ဘောလုံးအားကစားသမားတစ်ယောက်လို ယောက်ျားပီသပြီး မာထန်နေတဲ့ပုံစံက အံ့သြလောက် အောင် ကြင်နာတတ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာပါပဲ။ ပြီးတော့ ပေါင်းရသင်းရတာကောင်းတယ် Friendly ဖြစ်တယ် သက်သောင့်သက်သာရှိသလိုခံစားရတယ်၊ ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်အဲ့ပုံစံဆိုပေမယ့် တစ်ခါတလေတော့ ငါသိငါတတ် လုပ်တတ်သလိုပဲ။ ကျွန်တော့်ဆို သူ့ကြောင့်အမြဲလို ရယ်မောပျော်ရွှင်နေရတတ်တာ။ သူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တင် ရင်ထဲ မြူးသွားသလို ခံစားရပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ကမ္ဘာပါ။ သူ့ကိုနမ်း…..ကိုယ်နံ့လေးကိုရှူရှိုက်….အာ….အဲ့အတွေ့အကြုံ လေးရရင်ဖြင့် တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရလောက်တယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ကူးနဲ့အရူးထနေခြင်းဟာ ကျောင်းဆင်းခေါင်းလင်းထိုးသံကြောင့်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုးထခဲ့ရပါတယ်။ ရှေ့က ဆရာက လည်း အိမ်စာ Assignment တွေကိုလုပ်ခဲ့ဖို့ အတန်းထဲကထွက်နေတကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကို အော်ပြီး ပြောနေပါရဲ့။ နေမျိုးအောင် ကို ကျွန်တော်က နေမျိုးလို့ခေါ်တာဗျ။ သူ အတန်းထဲကထွက်မသွားဘဲ ကျွန်တေ်ာ့ရှိရာကို လှမ်းလာပြီး ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ `ငါ ဆရာနောက်ဆုံးသင်ခဲ့တဲ့တစ်ပုဒ်ကို နားမလည်ဘူးကွာ တွက်တတ်ဘူး´ `မင်းတွက်ပြမယ်မဟုတ်လား? အဲ့တာနားမလည်ရင်တော့ လာမယ့်အပတ်မှာဖြေမယ့် Test တော့ကျမှာဗျ´တဲ့။ ကျွန်တော် နှစ်ခါမစဉ်းစားပါဘူးအဖြေပေးဖို့။ ဒါပေမဲ့ အဖြေပေးဖို့အလျင်မလို မိအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းကာ လေသံကိုအေးဆေး လုပ်လိုက်တယ်။ `အေး…နက်ဖြန်ဆိုရမလား ၁၀နာရီဝန်းကျင်လောက်လေ၊ ငါတို့ တနေကုန်စာလုပ်လို့ရတယ် ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုလုပ်ကြမယ်လေ´ သူ့သွားစွယ်ဖွေးဖွေးတွေ ပေါ်တဲ့အထိပြုံးတယ်ဗျ။ `အဆင်ပြေသား´ဆိုပဲ။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသား ကျောင်းရှေ့တံခါးဝမှာ တိုးဝှေ့နေကြတဲ့လူတန်းကြီးကြားထဲ ပါဝင်စီးမျောကြပါတယ်။ နေမျိုးကတော့ သူ့ကား လေးမောင်းပြီးပြန်သွားတာပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်ခြောက်ကိုသုံးနဲ့အိမ်ပြန်ပါတယ်။
`ငါ့ကားနဲ့မောင်းပြီး မင်းအိမ်လိုက်ပို့မယ် ဆိုတိုင်း ဘာကြောင့်ငြင်းရတာလဲ ငါတော့နားမလည်ဘူးကွ´
`အဲ…မင်းကားလေး Gas မကုန်စေချင်လို့ပါကွာ´လို့ကျွန်တေ်ာ လိမ်ညာလိုက်တယ်။
`အာ…မင်းနေတဲ့အိမ်နဲ့ ငါနေတဲ့အိမ်က သိပ်မှမဝေးတာပဲဟာကို၊အဆင်ပြေပါတယ်ဟ´
စင်စစ်တော့ ကျွန်တော့်အိမ်လေးရဲ့လက်ရှိ အခြေအနေမြင်ကွင်းမျိုးကို သူ့ကိုမမြင်စေလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။ နေမျိုးအနေနဲ့ မှတ်မိကောင်း မှတ်မိမယ့် ကျွန်တေ်ာတို့အိမ်ရဲ့ပုံရိပ်လေးက ခပ်သေးသေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အပြင်အဆင်လေးပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သူ ငယ်ငယ်တုန်းက တစ်ခါတလေလာလည်ခဲ့ချိန်ကိုပေါ့။ အခုတော့ ရှုတ်ပွနေပြီး တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ယိုင်နဲ့နေပြီ။ အလုပ်အကိုင်မရှိ အရက်သောက်တတ် တဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးတစ်ယောက်ရဲ့ပဲ့ကိုင်မှုကြောင့်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မတော်တဆကားတိုက်မှုကြောင့် ကျွန်တော့်မေမေဆုံးသွားပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ဖေဖေတစ်ယောက် အရက်ကို တော်တော်သောက်တော့တာပါပဲ။ သူတည်ထောင်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းကိုဦးစီးဦးဆောင်မလုပ် နိုင်တော့တဲ့အထိပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသားစားသောက်နေနိုင်သေးတာက ဖေဖေ့ညီရဲ့ဖေးမမှုကြောင့် ရှယ်ယာအချို့ရဲ့ဝင်ငွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း အိမ်တံခါးလေးကိုဖွင့်ပြီး ဧည့်ခန်းထဲဖြတ်ကာ ၀င်လာတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုလှမ်းအော်နေပါရဲ့။ ကျွန်တော် ကျွန်တော် ချစ်ရသောသူကို ဒီမြင်ကွင်းမျိုးမမြင်စေချင်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ပြည့်စုံချမ်းသာလှတဲ့ သူ့ကိုပေါ့။ သူ့မိဘတွေက တော်တော်ကောင်းတဲ့ အိမ်ကျယ်ကြီးတစ်လုံးကိုပိုင်ဆိုင်တယ်….ချစ်စရာခွေးလေးတစ်ကောင်ရယ်…..ကျေနပ်ဖွယ်အလုပ်အကိုင်တွေပိုင်ဆိုင်ကြတယ်….တကယ့် လူတိုင်းရဲ့အိပ်မက်ထဲမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့အတော်ကံကောင်းကြတာပဲဗျာ။
နေမျိုးနဲ့ ကျွန်တော် လမ်းခွဲလာပြီးနောက် စနေနေ့မှာတွေ့မယ့်အကြောင်းကို စတွေးမိပါတယ်။ နွေရာသီများစွာကိုဖြတ်သန်းပြီးနောက် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကျောင်းချိန်ပြင်ပမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်ပါရဲ့။ နောက်ဆုံးအကြိမ်သူ့အိမ်ကိုသွားလည်တုန်းကတော့ သူဟာ ဘောလုံးကစားတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့ပုံကိုပြန်မြင်ယောင်မိပါတယ်။ အင်း…သူ့ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ပြောဖို့ အချိန်ရောက်ပြီလို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဗျ။ ဒီတစ်နှစ်ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် နောက်ဆုံးနှစ်မဟုတ်လား။ ဖွင့်ပြောပြလိုက်ရင် ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်ပျက်လာမယ် ကောင်းမလား ဆိုးမလား စမ်းသပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်မှာပါလေ။ အဆိုးရွားဆုံးလည်း ကြုံတွေ့ ရနိုင်တာပဲ။ ကောလိပ်စတက်ကာစ လူသစ်လေးတစ်ယောက်လို ကျွန်တော့်ရင်တွေ လှုပ်ရှားစပြုလာပါတယ်။ ဟုတ်တယ်…အခုဟာက သူ့ကို တရားဝင်ပြောပြတော့မှာ။ မနက်ဖြန်။
အိမ်တံခါးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အရက်နံ့ကိုထောင်းထောင်းထနေတာပါပဲ။ ဖေဖေ တစ်ယောက် လက်ထဲမှာပုလင်းအလွတ်တစ်လုံးကိုင်ကာ နိုးထစပြုနေတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ကိုပြောသမျှ လုပ်ပေးသမျှကို ဂရုတစိုက်လုပ်ရတာပေါ့လေ။
`ဟိုကောင်….လာစမ်း လမ်းထောင့်က စတိုးမှာ အရက်တစ်ပုလင်းသွားဝယ်ပေးစမ်း တုန့်နှေးတုန့်နှေးနဲ့လမ်းလျှောက်မနေနဲ့´
သူ စကားစတာနဲ့ဘယ်ကိုဦးတည်သွားမယ်ဆိုတာ အလိုလိုသိနေသလိုကိုဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်ဘယ်လိုလာမယ်ဆိုတာ မသိတော့ပါဘူး။
`အဖေ….သားအသက် မပြည့်သေးဘူးလေဗျာ …..ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အပိုသုံးဖို့ပိုက်ဆံပြတ်နေတာ ရက်နည်းနည်းတောင် ကြာနေပြီဗျ´
`မင်း သောက်ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားစမ်း….ဆင်ခြေကြီးပဲ´ ဖေဖေ ကမူးရှူးထိုးထလာပြီးနောက် ကျွန်တော့်နံကြားကို ခပ်ပြင်းပြင်း လက်သီးတစ်ချက်သွင်းလိုက်တာ နာကျင်မှုကြောင့် ကျွန်တော် ငိုကြွေးမိပါရဲ့။ ဖေဖေကတော့ ခုံပေါ်တင်ထားတဲ့ အကျီကို ကောက်ဝတ်ကာ အိမ်ပြင်ဘက်ကို ထွက်သွားပါတော့တယ်။ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကနေ အသာကုန်းထပြီးနောက် ကျွန်တော့်အိပ်ခန်းရှိရာကို ခပ်သွက်သွက်လေး လျှောက်သွားလိုက်တာ…ဟင်း…မေမေ့ကိုသတိရလိုက်တာဗျာ။
အိပ်ယာပေါ်မှာ အသာလေးငြိမ်ပြီး ခဏတာအနားယူမိပါရဲ့။ ညာဘက်ခြမ်းက တော်တော်ကိုနာနေတာ။ မနက်ဖြန် ဟုတ်တယ် မနက်ဖြန် အကြောင်း ကျွန်တော့်အတွေးထဲရောက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် တွန့်ဆုတ်မိတာလည်းမဖြစ်မိဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်ပြည့်နေသလိုပါ။ ဒီကောင်လေးက ကျွန်တေ်ာ့သူငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တာ အလယ်တန်းလောက်ကတည်းကပဲလေ။ ကျွန်တော် သူ့ကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ….ကျွန်တေ်ာ့ ခန္ဓာကိုယ်က နာကျင်မှုနဲ့အပြိုင် သိချင်စိတ်တွေပြင်းထန်လာမိပါတယ်။ အခုလေးမှ လက်ခံရရှိထားတဲ့ လက်သီးနှင့် ထိုးနှက်ချက်ကြောင့် နာကျင်မှုဟာ နက်ဖြန်မှာ ကြုံဆုံရမယ့် ကိစ္စတစ်ခုကပေးမယ်ထင်ရတဲ့ နာကျင်မှု ထက်ဆိုးရွားနေလား…အိုး…။ စာကြည့်စားပွဲခုံပေါ်က မသုံးတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ Laptop လေးကိုအသာဖွင့်ကာ အင်တာနက်နဲ့ချိတ်ဆက် လိုက်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်က အချို့သောသူငယ်ချင်းများစီက အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေ ရကောင်းရနိုင်တာပဲမဟုတ်လား။ ဒီ chatting website ကိုတွေ့ခဲ့တာတော့ တော်တော်ကြာပါပြီ။ ကျွန်တော့် screen name – ej08 နဲ့ဝင်လိုက်ပြီးနောက် ညာဘက်ကော်လံမှာရှိတဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ Chat rooms များထဲမှ gay teen chatroom ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ ဟော….ကျွန်တော့်ရဲ့အွန်လိုင်းသူငယ်ချင်း ‘behind_closed_doors90’ ကိုတွေ့လိုက်ရပြီပေါ့။ တစ်ယောက်တည်း အပေါင်းအသင်းသိပ်မရှိတဲ့ လူတွေအတွက် ခေတ်ပေါ်နည်းပညာ အချို့က အကူအညီတော့ပေးနိုင်သားပဲလေ။ ကျွန်တော် သူ့နာမည်လေးကို ကလစ်ခေါက်ကာ private message window တစ်ခုခေါ် လိုက်ပါတယ်။
“ej08: ဟေး…နေကောင်းလား ငါ့ကောင်?”
“ej08: ကောင်းပါတယ်….ဒါပေမဲ့ ငါ့မှာ ပြဿနာနည်းနည်းရှိနေတယ်ကွာ”
“ej08: ငါ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ချစ်မိနေတာ ငါးနှစ်လောက်ရှိပြီကွာ။ ဒီနှစ်က ငါတို့ကောလိပ်နောက်ဆုံးနှစ်ဆိုတော့ ငါသူ့ကိုဖွင့် ပြောလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့။ တော်ကြာ ကျန်နေသေးတဲ့ ကာလလေးမှာတောင် မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်တွေဖြစ်သွားမှာလည်းစိုးရိမ်နေမိ တယ်ကွာ”
“ej08: ငါ သူ့ကိုချစ်နေမိတာတော့ဟုတ်တယ်…..ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေဆုံးရှုံးသွားရမယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကိုလည်း ရင်မဆိုင် နိုင်ဘူးကွ”
“behind_closed_doors90: မင်းဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ ငါပေါက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါပြောနိုင်တာကတော့ မင်း သူ့ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သာ ဖွင့်ပြောလိုက်သင့်တယ်ကွ။
`သူက တကယ့်သူငယ်ချင်းအစစ်အမှန်ဆိုရင် မင်းရင်ထဲကခံစားချက်ကို သူလက်မခံနိုင်သည်ထားဦး နားလည်ပေးနိုင်ရမယ်လေ။ တကယ်လို့ ခါးခါးသီးသီးနဲ့ ငြင်းဆန်လိုက်ပြီး သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေပြတ်တယ်ဆိုတော့လည်း သူဟာ သူငယ်ချင်းအစစ်အမှန်မဟုတ် ကြောင်း ရှင်းနေအောင်သိလို့ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား´
ကျွန်တေ်ာတို့ ခဏလေးတော့ ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း ဆက်ပြောဖြစ်ကြပါသေးတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော် logged off. အခု နည်းနည်းတော့ စိတ်တည်ငြိမ်သွားရပြီ။ သူပြောတာဟုတ်တယ်။ နေမျိုးဟာ ကျွန်တော့်ကို သူငယ်ချင်းအစစ်အမှန်အဖြစ်သဘောထား တယ်ဆိုရင် ကျွန်တေ်ာ့ခံစားချက်ကို သူလက်ခံနားထောင်ပေးမယ် နားလည်ပေးမှာပါ။ ဟိုသည်တွေး ဒုက္ခခံနေတာထက်စာရင် ဘာမှမထူးတဲ့ မျှော်လင့်ချက်အစား သူ့ကိုလက်လွှတ်လိုက်ဖို့ ဒီနည်းလမ်းလေးက လွယ်ကူစေမယ်ထင်ပါရဲ့။ သူ့ကိုဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုရင် တော့ ချစ်နေရပြီးမပိုင်ဆိုင်ရမယ့် နာကျင်မှုဟာ တော်တော်နာလိုခံခက်ဖြစ်မှာပါပဲလေ။ ဒါပေမဲ့ နေမျိုး ကျွန်တော့်ကို ပြီးတော့ ကျွန်တော့် ရဲ့ အငြင်းပွားဖွယ် သဘာကို လက်ခံလိမ့်မယ် ဆိုတာကို အလိုလိုသိနေသလိုပဲဗျာ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူဟာဘယ်လိုလူစားဆိုတာ မြင်တွေ့နေရပြီး ကျွန်တော့်ချစ်စိတ်တွေကို နိုးကြွစေတဲ့ ကြင်နာတတ်သူမဟုတ်လား။
မနက်ခင်းဟာ ကန့်လန့်ကာဆွဲဖွင့်လိုက်သလို ရုတ်တရက်ရောက်လာပါတယ်။ ခုတင်ဘေးက နှိုးစက်နာရီက ဆိုးဆိုးရွားရွားထအော်တာ များလန့်တောင်လန့်ရော။ အိပ်ယာပေါ်ကထဖို့ ညာဘက်ကိုစောင်းလိုက်တာ မနေ့ကအထိုးခံထားရတဲ့ဒဏ်က အကင်းမသေသေးဘူး။ ခပ်မြန်မြန်လေးထ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို သွက်သွက်ကလေးလုပ်လိုက်ပါတယ်။ မနက်ခင်းတိုင်း မိနစ် ၂၀မကြာတဲ့ ကျင့်သားရနေ တဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးပေါ့နော်။ ခါတိုင်း မနက်ခင်းတွေနဲ့မတူ ဒီနေ့တော့ အတွေးထဲ တရစ်ဝဲ၀ဲလည်နေတဲ့အကြောင်းလေးက ရေခဲတုံးကို လက်ဗလာနဲ့အချိန်ကြာကြာကိုင်ထားရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ထားပါတော့ ကျွန်တော် အိပ်ယာ နဲ့ အခန်းလေးကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် သန့်ရှင်းလိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။ ရေပန်းကနေ တဖွားဖွားကျလာတဲ့ ရေများ ကျွန်တော့်အရေပြားပေါ်ကျရောက်နေတဲ့ ခံစားမှုက အရာရာကလွတ်မြောက်နေသလိုခံစားရပါရဲ့။ အဲ့လိုအချိန် ဘာမှန်းကိုမသိဘူး ရင်ထဲ တလှိုက်လှိုက်ပျော်ရွှင်လာကာ တခစ်ခစ် ရယ်မောမိပါတယ်။ အခြားသော ဆယ်ကျောက်သက်များလိုပါပဲ ရေချိုးနေရင်းတန်းလန်းမှ စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာထဲ ခုန်ချမိပြန်ရော။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲဝယ် ဘယ်လိုအကြောင်းအရာ ဘယ်လိုကိစ္စတွေက နေမျိုးကို အချစ်စိတ်ခံစားတတ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာပေါ့။ အိုး….စိတ်ကူးယဉ်တာလဲ ယဉ်တာပေါ့ လက်တွေ့အပြင်မှာတော့ တဖွားဖွားထနေတဲ့ ဆပ်ပြာမြှုပ်တွေက ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို နုညံ့စွာထိတွေ့နေတာများ….သူ ဆွတ်ဖြန်းလာတတ်တဲ့ ရေမွှေးအနံ့လေးလို ပူနွေးရှိန်းမ်ြနေသလိုပါပဲ။ ပွတ်သပ်မိတဲ့ ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်လုံး သူ့လက်အစုံရောက်နေသလိုပဲ….အာ….လည်တိုင်လေးကိုသူ နမ်းတာများ တပ်မက်မှုအပြည့် အင်း….အာ။ တင်ပါးတွေကို ပွတ်သပ်တဲ့ သူ့လက်အစုံဟာ သန်မာလိုက်တာများ…ဟိ။ ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်ပါဘူး ပေါင်ကြားက မတ်ထောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို လက်နဲ့အသာဆုပ်ကိုင်ပြီး ကစားမိပါပြီ။ ဒါဟာ စိတ်ကူးနဲ့ရူးနေတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် တင်ပါးတွေကို လှုပ်ရှားကစားစေတဲ့ပြုမူမှုတစ်မျိုး ဖြစ်စေပါရဲ့။ နေမျိုးရဲ့လက်အစုံဟာ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံစီကိုများ ပွတ်သပ်ပြီး ငပဲကို သူ့လက်ကြီးနဲ့ဆုပ်ကိုင်လိုက်ရင်….အာ…အ ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်တော့ပါဘူး သုက်ရည်တွေကို ရေချိုးခန်းနေရာအနှံ့ကို ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်မိပါပြီ။ ပူနွေးနေတဲ့သုက်ရည် တွေဟာ ကျွန်တော့်လက်တွေထဲမှာရှိန်းမြနေစေရော။ ရှက်တော့လည်း ရှက်မိပါတယ်….ကိုယ့်စိတ်ထဲက ချစ်စိတ်ဝင်နေတဲ့သူ တစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သက်သယောင်စိတ်ကူးယဉ်မိတာကိုလေ။ ဖြစ်နိုင်တယ် မဖြစ်နိုင်ဘူး ကောက်ချက်မချနိုင်ပေမဲ့ နေမျိုးကို ကျွန်တော် တကယ်ချစ်နေမိခြင်းထင်ပါတယ်ဗျာ။
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ပဲ ရေတွေတဖွားဖွားနဲ့ သန့်စင်လိုက်ပြီးနောက် ၀တ်နေကျ အ၀တ်အစားတွေထဲကမှ နည်းနည်းပိုကြည့်ကောင်းမယ့် ဒီဇိုင်းကိုရွေးဝတ်လိုက်ပါတယ်။ နက်မှောင်နေသော အပြာရင့်ရင့်ဂျင်းဘောင်းဘီရယ်…အနက်ရောင်ဖျော့ဖျော့ တီရှပ်လေးရယ်ပေါ့။ တန်ဖိုးကြီးရေမွှေးဆွတ်ဖြန်းချင်ပေမယ့်….အင်းရှိတာလေးပဲဆွတ်ဖြန်းလိုက်ကာ ကျွန်တော့် Notebooks တွေကိုဆွဲယူလိုက်ကာ အိမ်တံခါးကို ပိတ်ပြီးထွက်လာလိုက်ပါတယ်။ လက်မှာပါတ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်နာမည်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့ 10း43မိနစ်ရှိပြီ။ နေမျိုးနဲ့ ကျွန်တော် သဘောတူထားတာက ကျောင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်က ကော်ဖီဆိုင်လေးမှာ သူ ကျွန်တော့်ကို 113း0နာရီမှာလာခေါ်မယ်ပေါ့။ ကော်ဖီဆိုင်ကိုရောက်ဖို့ ခြေလှမ်းတွေသွက်လိုက်ပေမယ့် 25 minutes လောက်တော့ကြာသွားတယ်ဗျာ။ ရောက်လည်းရောက်ရော အချိန်နည်းနည်းလိုသေးပေမယ့် နေမျိုးက ရောက်နှင့်နေပြီဗျ။
သူက တကယ့်ကိုသန့်ပြန့်နေတာပဲဗျာ….ကာကီရောင်ဘောင်းဘီရယ် ကော်လံပါတဲ့ရှပ်တစ်ထည်ရယ်ဝတ်ထားပြီးတော့ Cappuccino တစ်ခွက်သောက်နေတယ်။ ကျွန်တော်လာနေတာကိုလည်းသူမြင်ရော ပါးချိုင့်လေးပေါ်အောင်ပြုံးပြရော။ `ဟေး…ညီညီ! တော်သေးတာပေါ့ ငါရောက်တာလည်းမကြာသေးဘူးကွ´လို့ပြောလည်းပြော ကျွန်တော်ထိုင်ဖို့နေရာကို အမူအယာနဲ့ ညွှန်ပြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း နှစ်လိုစွာပြုံးမိရရင်း မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ အသာထိုင်လိုက်ကာ တစ်ခုခုတော့ စားမှပဲလို့ အာရုံကပ်မိပါရဲ့။ `မင်း ဘာစားမလဲ?’ နေမျိုးကမေးတယ်။ အဲ….သူဂရုတစိုက်မေးတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုစောင့်နေမိတာပါ။ အင်း…ဘာမှမစားတော့ပါဘူးလို့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးငြင်းလို့ကလည်းမကောင်းနော်။ `ဟ လုပ်ပါဟ..ဘာစားမလဲ´ သူ တခစ်ခစ်ရယ်လိုက်ရင်း ပြုမူနေကျ မျက်စိတစ်ဖက် ဖျက်ကနဲမှိတ်ပြတယ်။ သူ သက်ပြင်းလေး အသာချလိုက်ရင်း စားပွဲထိုးကို Pancakes နဲ့ လိမ္မော်ရည်ကိုနှစ်ယောက်စာမှာလိုက်တယ် လေ။ ကျွန်တော်သည်လည်း သက်ပြင်းမောလေးချမိတာပေါ့။ `မင်း….ရောက်လာရင် ငါ့မျက်နှာကိုပဲကြည့်နေတော့တာနော် ငါ့ကောင်´ မျက်ခုံးလေးတစ်ဖက်ကို မသိမသာကုတ်ခြစ်လိုက်ရင်းနေမျိုးကပြောတာ။ `မင်း ငါ့ကိုစာရှင်းပြဖို့ အချိန်ရရဲ့လား အဆင်ပြေတယ်မဟုတ် လား ငါ့ကောင်?’ သူ့ဆံနွယ်လေးတွေ လှုပ်သွားတာကို ကျွန်တော်ငေးမိရရင်း ပါးပြင်တွေနွေးလာမိသလိုပဲ။ အိုး….တော်သေးတယ် စားပွဲခုံကကြီးလို့ ကျွန်တော့်ပေါင်ခွဆုံက ဘောင်းဘီကြီးရုတ်တရက်ဖောင်းကြွလာတာကို ဖုန်းကွယ်ထားနိုင်တာ။
စားပွဲထိုးကောင်မလေးက ကျွန်တော်တို့စားမယ့်အစားအသောက်တွေနဲ့ရောက်လာတော့ နေမျိုးက မျက်ခုံးတစ်ချက်ပင့်ပြလိုက်ကာ ကောင်မလေးကို အနားတိုးစေရင်းtip money ကို အပြုံးတဝေေ၀နဲ့စောစောစီးစီးပေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ဘာမှန်းကိုမသိ သူတို့ကိုကြည့်ပြီး မလိုတမာ မနာလိုစိတ်ကထကြွလာမိတယ်ဗျ။ စကားတပြောပြောနဲ့ ဗိုက်ဆာတာကိုဟန်ဆောင်ဖုန်းကွယ်ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ သူက ရယ်ရယ်မောမောစကားပြောနေရင်းမှ ကျွန်တော်စားသောက်နေပုံကိုကြည့်ပြီး ရပ်တန့်လိုက်ကာ `မင်း ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ငါထပ်ဝယ်ခဲ့မယ်လေ´တဲ့။ သူပြောတဲ့စကားတွေက တခြားအဓိပ္ပာယ်မပါ ဗိုက်ဆာနေတဲ့ ကျွန်တေ်ာ့ကို ၀ယ်ကျွေးဖို့အကြောင်းပြချက် ကောင်းလေးလည်းရှိတာကိုးနော်။ ကျွန်တော့်ပါးပြင်တွေ နီရဲနေမှာသေချာတယ်…`အာ ရပါတယ်…မင်းကိုဒီလောက်ဝယ်ကျွေးခိုင်းရတာ တော်လောက်ပြီ´။ သူ့ကြည့်ရတာ ကျွန်တော့်ကို တစ်ခုခုပြောချင်သေးသလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် စကားလုံးမေ့သွားပုံရတယ် ကျွန်တော်က ဖြတ်ပြောပြီး ငြင်းလိုက်တာကိုး။
ကျွန်တော်တို့ စားသောက်နေတာတွေကိုလက်စသပ်လိုက်ကာ ကားထဲမှာဆက်ပြီး စကားစမြည်ပြောကြလေသတည်းပေါ့။ တကယ့် အနက်ရောင် BMW ကားကြီးက ကြွားရွားနေတာများ ကျွန်တော်နှင့်ယှဉ်စရာမလိုအောင် ဘယ်လိုပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတာပြဆိုနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အကြောင်းအရာမယ်မယ်ရရမဟုတ်ဘဲ ဟိုရောက်သည်ရောက်စကားပြောနေကြတာ သူ့လက်ကိုင်ဖုန်းကအသံမြည်လာ မှပဲ ရပ်ကြပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်မျက်နှာကို တစ်ချက်ကြည့်တယ်…ထူးနေပါပြီလို့ ကျွန်တော်ထင်တော့ထင်လိုက်ပေမယ့် ခေါင်း တစ်ချက် ငြိမ့်ပြလိုက်ကာ ဖုန်းကိုင်ဖို့အချက်ပြလိုက်ရဲ့။ သူ ဖုန်းကို ကိုင်လိုက်ကာ `ဟဲလို´လို့ထူးတော့ တစ်ဖက်က အနည်းငယ်ထိတ် လန့်နေတဲ့လေသံနဲ့ပြောနေတဲ့စကားသံကိုကြားရပါတယ်။ နေမျိုးမျက်နှာဝယ် ဇဝေဇ၀ါအမူအယာပေါ်လာပြီး `ဇီဇ၀ါလား?’တဲ့။ ဘယ်သူ ဆိုတာ ကျွန်တော်သိပြီ။ အဲတာ နေမျိုးရဲ့အရင်ကောင်မလေးလေ။ သူမက ကျွန်တော်မြင်ဖူးသမျှ ကောင်မလေးတွေထဲမှာ ချမ်းသာသော မိဘကပေါက်ဖွားကာ ကျောင်းမှာပေါ်ပြူလာ အဖြစ်ဆုံး ပြီးတော့ ခင်မင်ဖို့ကောင်းကာ တကယ်စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ပခုံးတ၀ိုက် ဝေ့၀ဲနေတဲ့ ဆံနွယ်ခွေတွေရယ် ပြီးတော့ ဖြူဖြူသွယ်သွယ် နုညံ့တဲ့ပုံစံပေါက်တဲ့ကောင်မလေး။ နေမျိုးတွဲခဲ့သမျှရည်းစားဟောင်းတွေထဲမှာ သူ့ရည်းစားဆိုပြီး တကယ်အတည်တွဲခဲ့တဲ့သူ။ နေမျိုးပြောတာကတော့ ပြောပြလို့သိပ်မကောင်းတဲ့ အကြောင်းအချို့အရလမ်းခွဲဖြစ်ခဲ့ကြ တာပါဆိုပဲ။
နေမျိုးစကားပြောတာ အဆုံးသတ်ပုံက `ဆောရီး ဇီဇ၀ါ….ကိုယ်တို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး´လို့ပြောပြီးဖုန်းချပစ်လိုက်တယ်။ သူ့ကို ကျွန်တော် ကြည့်လိုက်တော့ `အင်း…ဇီဇ၀ါလေ….သူက ငါနှင့်ပြန်ပြီးဆက်ချင်နေတာ။ ဒါပေမဲ့ ငါ မဆက်ချင်ဘူးကွ´
`ဘာလို့လဲ? မင်း သူနဲ့တွဲတုန်းကပျော်နေခဲ့တာပဲလေ´
`ငါ့မှာ ငါ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ငါရှိပါတယ်ကွာ´ သူကအဲ့လိုတုန့်ပြန်ပြောတော့လည်း ကျွန်တေ်ာအသာငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် လှပပြည့်စုံတဲ့အိမ်ကြီးရှိရာကို ဦးတည်လိုက်ကြပါတယ် ပြည့်စုံကြွယ်ဝတဲ့ လူတစ်စုနဲ့အံကိုက်ဖြစ်သော နေရာတစ်ခုစီပေါ့။ ခြံရှေ့မျက်နှာစာဝယ် လှပပြီး သူ့နေရာနဲ့သူအစီအစဉ်တကျရှိနေတဲ့ ဥယျာဉ်လေးရယ်…ပြီးတော့ ရေတွေတဖွှားဖွား ကျနေတဲ့ ရေတံခွန်အငယ်စားလေးရယ်ရှိနေတယ်။ သူ ဂိတ်ဝကနေ လျောကနဲမောင်းဝင်လိုက်ရင်း ကားပါကင်ထိုးလိုက်တာများ တကယ်ကျွမ်းသဗျ။ ကျွန်တော်သည်လည်း သူ့လိုဘ၀မျိုးကို ကာလကြာရှည်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ မရှိမရှားလည်း မဟုတ် ပြည့်စုံသည်လည်းမဟုတ်သောအခြေအနေတစ်ရပ်မှာ အသက်ရှင်နေရပါရဲ့။ အိမ်ထဲကို သူဦးဆောင်ဝင်သွားပါတယ်။ တစ်အိမ်လုံးလည်း တိတ်ဆိတ်လို့ သူ့မိဘတွေက စီးပွားရေးကိစ္စနှင့် ခရီးတစ်ခုထွက်သွားကြတာလေ။ ကျွန်တေ်ာတို့ သူ့အိပ်ခန်းရှိရာ ကို ဦးတည်သွားလိုက်ပါတယ်။ အင်း…ကျွန်တော့်အခန်းလေးထက်အများကြီး ကြီးတာပေါ့။
ကျွန်တော် ကြီးမားပြီး အိစက်နေတဲ့သူ့အိပ်ယာကြီးပေါ် ပေါ်လောမျောလိုက်တယ် ကလေးတစ်ယောက်လိုပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်က ဗီဒီယိုဂိမ်းအသစ်များစွာကို အတူကစားခဲ့ရာ….ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်အသစ်အဆန်းများစွာသူဝယ်လာသမျှကြည့်ကြပြီး အချိန်ဖြုန်း ခဲ့ကြတာလေ။ ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်လေးကို ပြန်များသွားလိုက်ချင်ပါရဲ့။ အခုလို စဉ်းစားအသက်ရှူနေရသောဘ၀မရောက်သေးခင် အချိန်တစ်ခု။ နေမျိုး လက်ထဲမှာစားသောက်စရာတွေအများကြီး ကိုင်ဆွဲပြီးဝင်လာတယ်။ ပြီးတော့ ခုတင်စွန်းမှာထိုင်ချလိုက်ရော။
`ငါတော့ ငယ်တုန်းကအချိန်လေးပြန်ရောက်ချင်တော့တာပဲ´တဲ့သူ့နှုတ်ဖျားကထွက်လာတယ်။ သူ ဘယ်လို ဘယ်လိုများ ကျွန်တော် တွေးနေတာကို ဘယ်လိုသိနေပါလိမ့်?
အကြောင်းအရာမျိုးစုံ ဟိုရောက်လိုက် ဒီရောက်လောက်နဲ့ အများစုကတော့ ရယ်မောစရာလေးတွေ ကြုံဆုံခဲ့ရသော ပြဿနာလေးတွေ အကြောင်း ပြန်လည်သုံးသပ်ပြောဆိုကြရင်း နာရီတွေကိုဖြတ်ကျော်မိကြပါတယ်။ ၀ိုး…..ဘာရယ်မဟုတ် စကားပြောနေလိုက်ကြတာ နာရီကြည့်လိုက်မိတော့ 43း0 ၀န်းကျင်လောက်ဖြစ်နေပြီ။ ကျွန်တေ်ာတို့ ပြောချင်နေတာ ပြောဖြစ်ကြတာလေးတွေက စကားစသပ်ဖို့ သုံးနာရီဝန်းကျင်လောက် ကြာရော။ ကျွန်တော် ဒီအချိန်ဟာ ဖွင့်ပြောဖို့ အချိန်ကောင်းတစ်ခုပဲလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကာ ကျွန်တော်ဖွင့်ပြော ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာကို ဖွင့်ထုတ်လိုက်ဖို့ ကြံစည်လိုက်ပါတယ်။
`နေမျိုး….ငါ….ဟို….မင်းကို ပြောစရာလေးရှိလို့´ ကျွန်တော် အွန်လိုင်းက chatroom ထဲမှာပွင့်လင်းပြောခဲ့သလိုဖွင့်ပြောဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားတင်းလိုက်တယ်။ ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့လည်း နည်းနည်းတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိလာရပါရဲ့။ နေမျိုးက ကျွန်တေ်ာ့ မျက်နှာကို စူးစိုက်ကြည့်ကာ `အင်း…ပြော´
`အေး….နေမျိုး….ငါတို့ အရင်းနီးဆုံးသူငယ်ချင်း ဖြစ်လာကြတာ အချိန်တော်တော်ကြာခဲ့ပြီနော်?’
`ဟို….ငါ ဒီအချိန်ရောက်လာတော့….ဟို…ငါကလေ….´ ရုတ်တရက် ကျွန်တော်စကားလုံးရှာမရဖြစ်သွားပါတယ်။ နေမျိုး ကျွန်တော့် မျက်နှာကို သေချာစူးစိုက်ကြည့်လာပါပြီ။ သူ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ ကျွန်တော်ဘာကိုလိုအပ်နေတယ် ဘာကိုပြောချင်နေတယ်ဆိုတာ သိနေသလားလို့။ `အိုး…God…ငါ…ငါ မင်းကိုချစ်နေတယ်ဆိုတာ ဖွင့်ပြောဖို့နှစ်တွေအများကြီးကြာခဲ့တာပါ၊ နေ့ရက်တိုင်း ငါ တဖြည်းဖြည်း ပိုချစ်လာပြီ…အခု မထိန်း´
ကျွန်တော့်စကားလုံးဟာ သူ့အနမ်းများကြောင့် ရှေ့ဆက်ခွင့်မရတော့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့နုညံ့တဲ့နှုတ်ခမ်းသားတွေဟာ ကျွန်တော့်သွေးကြော မျှင်တွေကတစ်ဆင့် တစ်ကိုယ်လုံးကို အားအင်ဖြည့်ပေးလိုက်သလိုပါပဲ နွေးကနဲရင်ခုန်မိတယ်။ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေကြားထဲက နေတိုးဝင်လာတဲ့ ပူနွေးနေတဲ့သူ့လျှာလေးကြောင့် လျှပ်စီးတွေ တဖျပ်ဖျပ်လက်နေသလို ပျော်ရွှင်မိရဲ့။ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း မဟုတ်တဲ့ တပါးသူရဲ့ပြင်ပပစ္စည်းထိုးသွင်းလာတာကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကို လက်ခံမိပါတယ်။ အိုး….သူ အနမ်းကျွမ်းကျင်ပုံများ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိဘူး။ သူ့မျက်ဝန်းတွေကို စိုက်ကြည့်မိတော့ ကျွန်တော်စပါးကြီးမြွေအညှို့ခံရသူလို ငြိမ်သက်ပြီး မွတ်သိပ်သော တပ်မက်သော ပွေ့ဖက်မှုများ အနမ်းခပ်ကြမ်းကြမ်းများကို တစ်ချိန်တည်းရရှိလိုက်ပါတယ်။ ပျော်လည်းပျော်တယ် ရှော့ခ် လည်းရမိပါတယ်….ခံစားချက်ကဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘူးဗျာ။ နေမျိုး ကျွန်တော့်ပခုံးကိုကိုင်လိုက်ကာ အနမ်းစစ်ပွဲကိုရပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တစ်ခုခုပြောဖို့ ပါးစပ်ဟလိုက်တော့ သူက ခပ်လုံးလုံးသူ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုကို အသာထည့်ရော…..တိတ်တဆိတ် နုနု ညံ့ညံ့ စကားလုံးတွေ သူ့ပါးစပ်ကနေထွက်လာပါရဲ့။
‘ငါသိတာပေါ့ မင်းချစ်နေတာကို….အဲဒါက သိဖို့အရမ်းလွယ်ကူလွန်းပါတယ်။မင်းကိုမင်းတွေးနေတာ မင်းလုပ်ချင်နေတာတွေကို ငါသိသိ နေတာကို သတိထားမိမှာပါ။ ငါ့စိတ်ထဲက အချစ်စိတ်တွေ ပြီးတော့ မင်းအပေါ်ထားတဲ့ သဘောထားတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမပြောနိုင် သေးတာကို ပြန်တောင်းပန်ရမယ်ထင်တယ်။ ငါလည်း မင်းကိုချစ်နေမိတာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ငါ့အတွက်ကျတော့ မိဘတွေက ဘာတွေပြောကြမလဲ….ကျောင်းကဘောလုံးအသင်းမှာ ဦးဆောင်သူလုပ်နေရတဲ့ငါ့အနေအထား…..ပြီးတော့ တခြားဖိအားတွေက အများ သားဆိုတော့ ငါဘာလုပ်ရမလဲ မသိခဲ့ဘူး။ အရာအားလုံး…အားလုံးဟာ အချစ်ထက် အရေးပိုမကြီးမှန်းငါသိတာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ အဲဒါ့ကြောင့် ငါ…ငါ ဇီဇ၀ါနဲ့ လမ်းခွဲဖြစ်ခဲ့တာ။ I’m sorry’ သူ့ဦးခေါင်းကို ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲတိုးဝှေ့လိုက်ရင်းပြောတာပါ။ ကျွန်တော် ဘာပြောရမှန်းမသိအောင် လေဟာနယ်ထဲလွင့်မျော့ခဲ့ရပါတယ်။ `ငါတောင်းပန်ပါတယ်ကွာ….မင်းဖွင့်ပြောတော့မှာ ငါလည်းမင်းကို ချစ်နေကြောင်း ပြန်ပြောမိတာလေးကို…မင်းလည်း ဒီလိုမျိုး ရင်ဆိုင်ရခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ရခဲ့မှာပဲနော်´
ကျွန်တော် သူ့မေးနှစ်ခွလေးကို လက်ဖျားလေးတွေနဲ့အသာမော့စေလိုက်ရင်း နှုတ်ခမ်းများကို အနမ်းတစ်ပွင့်ခြွေလိုက်ပါတယ်။ `ငါ မင်းကို ချစ်တဲ့စိတ်က အရူးအမူးပါပဲကွာ´လို့တစ်ခွန်းပဲ နေမျိုးကိုပြောလိုက်နိုင်ပါရော။ သူ့မျက်နှာလေးဟာ ၀မ်းသာဝမ်းမြောက်စိတ်နဲ့ အတူ ၀င်းပလာကာ ကျွန်တော့်ကိုမွတ်သိပ်စွာပြန်နမ်းတာများ အိပ်ယာပေါ်ကိုတောင်လဲကျမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ပါးပြင်လေးကို သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ပွတ်သပ်ပြီးနောက် ကျွန်တော့်နားရွက်နားကိုအသာတိုးကပ်ရင်း လှိုင်းထနေတဲ့အသံနဲ့ `ငါတို့….ချစ်…ချစ်ပွဲဝင် ကြရအောင် ညီညီ´တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်စွဲမက်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်က ကြာကြာလှပြီ…ဟင့်အင်…..ကျွန်တော် မငြင်းဆန်နိုင်တော့ပါဘူး ချစ်ပွဲဆင်နွှဲခွင့်ပြုပါ။ သူ့အသံလေးကလေ Romantic ဖြစ်လွန်းသလို စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းလှတာများ ကျွန်တော့် သွေးသားတွေကို ဆူပွက်လာအောင် မြူဆွယ်နေသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကို ခပ်တိုးတိုးလေးပဲ ပြန်ပြောလိုက်ပါရဲ့ `မင်းဘာလုပ် ချင်တာလဲ….ကြိုက်တာသာလုပ်ပါကွာ ငါသဘောတူတယ်´လို့။ သူ ကျွန်တော့်ကို တင်းကြပ်စွာပွေ့ဖက်ပြီးနောက် သူ့မျက်နှာကို ကျွန်တော့် မျက်နှာဆီဖိကပ်ပါတော့တယ် အသက်ရှူငွေ့နွေးနွေးလေးတွေ တို့ထိတာကိုသတိပြုမိတဲ့အထိပေါ့။ သူ့ကိုယ်ပေါ်ကအ၀တ် တွေကို အကုန်ချွတ်လိုက်တယ်….နောက်တော့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်ကအ၀တ်တွေကို သူအသာအယာချွတ်ပေးတယ်။ နှစ်ဦးသား ကိုယ်ခန္ဓာဝယ် အ၀တ်ကင်းမဲ့ကုန်ချိန်မှာတော့ သူ့အရေပြားနဲ့ ကျွန်တော့်အရေပြားကိုဖိကပ်ပြန်ပါရဲ့။
`မင်းက တော်တော်ကြည့်ကောင်းတာပဲ …အဲဒါကိုသိရဲ့လား´ ကျွန်တော့်ပါးပြင်ရဲရဲနီသွားတယ်။
`အာ…မင်းနဲ့ငါမယှဉ်နိုင်ပါဘူးကွာ´လို့ ပဲပြန်ပြောနိုင်သား။ ဟုတ်တယ်လေ သူကမှ တကယ့်ကို အံ့အားသင့်ဖို့ကောင်းအောင်လှပတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာ။ ခေါင်းက နေခြေဖျားထိ သူ့နေရာနဲ့သူ ကြွက်သားတွေကပြတ်သားလှပနေတာ ရွှေညိုရောင်အတိုင်းပဲ။ သူ့ငပဲက ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားပြီး ဆီးစပ်က အမွှေးလေးတွေက ကောက်ကွေးလို့…၈လက်မလောက်တော့ရှိမလားဘဲ။ အာ…သူ့ငပဲကို ကျွန်တော်ကြည့်နေတာ သူမိသွားတယ်ဗျ။
`မင်းကြည့်နေတဲ့ဟာကို ကြိုက်လား´ ကျွန်တော် သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာကနေ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို ပြန်နမ်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လည်တိုင်လေးတွေ….နောက်တဖြေးဖြေးနဲ့ သူ့ဆီးခုံရှိရာဆီကိုရွှေ့သွားလိုက်ကာ သီးမွှေးငှက်ပျောသီးခပ်ထွားထွားတစ်လုံးလို ဖြောင့်တန်းပြီး လုံးတုတ်နေတဲ့ ငပဲရဲ့သဏ္ဌာန် သေချာကြည့်ရင်း ကြိုက်ကြောင်းအသံမဲ့အဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ ရင်ခုန်သံတွေအရမ်းမြန် ပြီးတော့ သူ့ငပဲကိုလက်နဲ့လှမ်းကိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးကိုက တကယ့် ရိုလာကိုစတာပါပဲ။ အသာအယာလေးကိုင်ကာ ပန်းသွေးရောင်ရဲနေတဲ့ ငပဲခေါင်းလေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ထိကြည့်လိုက်တယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်တို့ကြည့်လိုက်ပြီး နောက် ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းလွှာတွေနဲ့ညှပ်ဆွဲကာ အာခံတွင်းထဲ ရှိုက်သွင်းလိုက်တာပေါ့နော်။ သူ့နှုတ်ဖျားက ခပ်တိုးတိုးကနေ ညည်းညူသံက တဖြည်းဖြည်းကျယ်လာတော့ ကျွန်တော့်ပြုမူချက်ကို သူကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း သဘောကျသွားရ ပါတယ်။ သူ့ငပဲခေါင်းလေးရဲ့အောက် မေးသိုင်းကြိုးလေးကို လျှာဖျားလေးနဲ့ တို့ထိတို့ထိလည်းလုပ်တယ်…..ပြီးတော့ ကွမ်းသီးခေါင်း တစ်ခုလုံးကိုလည်း တပြွတ်ပြွတ်စုပ်တယ်….နောက်ပြီး….ငပဲတစ်ခုလုံးကို ကျွန်တော့်လည်မျိုထဲထိရောက်မတတ် မျိုချလိုက်တာ သီးတောင် သီးတော့မလိုဖြစ်ရပါသေးရဲ့။ ခဏတော့ အသက်ပြန်ရှူရရင်း နောက်တစ်ကြိမ် အထုတ်အသွင်းထပ်ထပ်ကြိုးစားပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ rhythm မိမိနဲ့ ကျွန်တော် ကစားတတ်လာတာပေါ့လေ။ နေမျိုး နှုတ်ဖျားက ငှက်ဖျား ငန်းဖမ်းသလို တကျွတ်ကျွတ် ညည်းညူရင်း သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့်ပခုံးတွေ နောက်ကျောပြင်တွေကို အသာအယာအပြန်အလှန်ပွတ်သပ်ပေးတော့ ကျွန်တော် ကြက်သည်း တဖြန်းဖြန်းထကာ ကျေနပ်မိပါတယ် ခင်ဗျ။ လည်မျိုထဲကနေ ပါးစပ် နှုတ်ခမ်းဖျားထိဆွဲထုတ်လိုက် လျှာဖျားလေးနဲ့ ငပဲကို ရဏ်ပတ်စုပ်မျိုကာ လည်မျိုထဲတိုင် သွင်းလိုက်နဲ့ကစားပေးလိုက်တာ သူ့ငပဲထိပ်ဝလေးကနေ ငံကျိကျိ အရည်ကြည်လေးတွေစို့လာ ရော။ ကျွန်တော် ဒီလောက်လေးနဲ့တော့ မရပ်လိုက်နိုင်ဘူး ရှက်လန့်တာတွေ ဘေးချိတ်လိုက်ပြီ။ သူ့တင်ပါးအစုံကို ကျွန်တော့်လက်နှစ် ဖက်နဲ့ထိန်းကိုင်ကာ ကျွန်တော့်ပါးစပ်နဲ့ သူ့ဆီးစပ်ကပ် ကပ်သွားတဲ့အထိဆွဲဆွဲယူပါတယ်။ ရှည်လျားလှတဲ့ သူ့ငပဲကြီးဟာ ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲမှာ မြုပ်မြုပ်သွားတာများ ရွှေဥတွေရော ဆီးခုံမွှေးတွေရော ကျွန်တော့်ပါးစပ်နဲ့ဖိကပ်သွားတဲ့အထိပါပဲ။ ရွှေဥလေးတွေကို လက်နဲ့ အသာအယာပွတ်သပ်ပေးပြန်တော့ သူတွန့်တွန့်သွားရကာ ရွှေပန်းနဲ့ ရွှေဥအဆုံကြားကွက်လပ်လေးကို လျှာနဲ့အပြားလိုက်ကပ်လျက် ပေးပြန်တော့ သူ့နှုတ်ဖျားက ညည်းသံကပိုမိုကျယ်လောင်လာပါရော။ ကျွန်တော်သိသလောက် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အပြန်ပြန် အလှန်လှန် လုပ်လိုက်တာ သူ့ငပဲ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ တွန့်လာတဲ့အထိပေါ့။
`Oh, God…….ညီညီ…ညီညီ…ငါ ပြီးပြီးတော့မှာ…အာ…အ´ နေမျိုးနှုတ်ဖျားက တတွတ်တွတ်ပြောကာ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကိုထိန်းကိုင် ရင်အသာအယာချွတ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့် ကျွန်တော်က သူ့ငပဲကိုပါးစပ်ထဲဝယ်ဆက်လက်ပြီး ကလိနေလိုက်ပါတယ်။ ခဏေနေတော့ ခြေဖြားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန် သူ့တင်ပါးတွေ ကော့ကော့တက်သွားရင်း ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲ ထိုးသွင်းထားတဲ့ သူ့ငပဲထိပ်ဝလေးကနေ ကျွန်တော့်လည်မျိုထဲတိုင် သုက်ရည်တွေကို ပန်းထည့်ရော။ ကျွန်တော် ငုံမထားဘူး ထွေးမထုတ်ဖြစ်ဘူး….တဂွတ်ဂွတ်နဲ့မျိုချပစ်လိုက် တယ်။ ထိပ်ဝလေးမှာ စို့ကျန်ရစ်တဲ့ သုက်ရည်လေးတွေကို လျှာဖျားနဲ့ ကလိကာယူ…ပြီးတော့ လိင်တံတလျောက်စီးကျသော သုက်ရည် အကြွင်းအကျန်များကို လျာအပြားလိုက်ကပ်ကာ သိမ်းယူတာပေါ့။ မပျော့မမာ သူ့ရွှေပန်းကို အသာဆွဲကိုင်မကာ ရွှေဥတွေကို အသာ အယာ တစ်လုံးခြင်း ငုံစုပ်လိုက်သေးတယ်နော်။
`ကဲ….ငါ ဘယ်လို Feels ခံစားရတယ်ဆိုတာ မင်းကိုပြန်ပြမယ်´ နေမျိုးက ကျွန်တော့်ကို မွှေ့ယာပေါ်ပက်လက်ပြန်လှဲစေကာ အဲ့ဒီ စကားကိုပြောတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်လည်း အလိုက်သင့် သူ့ညွှန်ကြားမှုအတိုင်း စီးမျောလိုက်ပါတယ်။ ပထမတော့ သူ ကျွန်တော့်ငပဲကို အသာအယာကိုင်ကာ ဆွတယ် အထက်အောက်ကစားတယ်လေ။ ခပ်မတ်မတ်လေးဖြစ်လာတော့မှ ကျွန်တော့်ငပဲခေါင်းလေးကို တကယ့် ဖွဖွလေးစုပ်ရော။ အာ…..ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်ဘူး သူ့ဟန်ကတစ်မျိုး တကယ့်ကို နုနုညံ့ညံ့နဲ့ ရွရွဖြေးဖြေးလေးကစားတာ။ ကျွန်တော့်ငပဲခေါင်းလေးကို အချိန်ကြာ စုပ်ပြီးနောက်မှာတော့ ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေကို တကယ့်ငြင်ငြင်သာသာ အနမ်းပေးပါတယ်။ `အိုး…..God…..အဲ့ဒီ….အာ..အ အဲ့ဒီ ဖီးလ်က အရမ်းမိုက်တာပဲ´ လို့ကျွန်တော့်မှာ မိန်းမောမှုနဲ့အတူ ခပ်ညည်းညည်းအသံထွက် ရပါရော။ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူကိုင်ရတာ အားရလို့လား ကြိုက်လို့လားမသိ လက်ဘယ်ညာပြောင်းကိုင်လိုက် ဟိုသည်ပွတ်သပ်ကစား လိုက်နဲ့လုပ်နေတာ သုက်ရည်တွေ ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲ ထွက်ကျချင်နေပြီဗျာ။
`အခု မင်းကို ချောက်ကမ်းပါးစွန်းရောက်အောင် ပို့ပေးမယ်´ သူ ကျေနပ်မိန့်မူးစွာပြောပါတယ်။ သူ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့ပါးစပ်ထဲ သွင်းနိုင်သမျှ အဆုံးထိဖိသွင်းတာများ သူ့လည်မျိုနံရံတွေနဲ့တို့ထိမိတဲ့အထိပါ။ သူ အော့အံမှုဖြစ်သလို ခံစားမှုမျိုးကို ကောင်းကောင်း ထိန်းနိုင်ပြီး ကျွန်တော့်ငပဲကို အထုတ်အသွင်း အဖိအဖော့နဲ့ ပါးစပ်ထဲကစားနေတာ နောက်ဆုံး ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး လျပ်စီးတွေ တဖျက်ဖျက်စီးဆင်းသွားသလို ပူနွေးတဲ့သွေးတွေ ဖြန်းပက်လိုက်သလို ကျေနပ်တဲ့ခံစားမှုအစွန်အဖျားကို ရောက်သွားရရင်း ကျွန်တော့် သုက်ရည်တွေကို ဘယ်တုန်းကမှ ပန်းမထုတ်ဖူးလောက်တဲ့ပမာဏနဲက ပစ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ သူ အားလုံး ဟုတ်တယ် အားလုံးကို အလဟဿ မဖြစ်လောက်အောင် အကုန်မျိုချပစ်တယ်လေ။ ကျွန်တော့် ညည်းသံ ခပ်တိုးတိုးလေးသာ ထွက်နိုင်ပါရဲ့။
`ဘယ်လိုလဲ ငါ့ကောင်….မင်းလုပ်ပေးတာကိုမှီရဲ့လား…ပြောဟ´ နေမျိုးက ငြိမ်ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို လှုပ်နှိုးသလိုမေးတယ်ဗျ။ ပြီးတော့ စွဲဆောင်အားပြင်းတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို ညှို့ကာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းဖျားတွေကို အသာအယာ တို့ထိ နမ်းရှိုက်ပါတော့တယ်။ ရွှန်းပတောက်စိုနေတဲ့ သူ့မျက်ဝန်းတွေကိုကို ကျွန်တော်စိုက်ကြည့်နေရင်း `ငါ…ငါ မင်း ဟိုထဲကိုထည့်ချင်တယ် ရမလားဟင်? ´မေးတာကို အသာအယာပြန်လည် အနမ်းချွေလိုက်ကာ `မင်း….မင်းတစ်ယောက်ထဲကိုပဲ ငါခွင့်ပြုမှာ…မင်းအတွက်´ လို့အဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် မပျော့မမာအခြေအနေလေးဖြစ်နေတဲ့ သူ့ငပဲကို တံတွေးတွေရွှဲနေအောင် -ုပ်ပေးလိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ ကျွန်တော့်ကို ခုတင်စောင်းမှာ ပက်လက်အိပ်စေပြီးနောက် ကျွန်တော့်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို သူထမ်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ငပဲကို ကွန်ဒုံးတစ်ခု စွပ်လိုက်ပြီးနောက် ကျွန်တော့်ခရေ၀ကို သွေးတိုးစမ်းရင်း တဖြည်းဖြည်းဖိသွင်းပါရော။ အ…အာ….သူနဲ့ ကျွန်တော့်ကြားမှာ တားစီးထား သော စည်းလေးဟာ အခုတော့ ပျက်သွားပြီလို့ပြောနိုင်ပါရဲ့။ သူ တကယ့်ကို မသိသာအောင်ဖြည်းဖြည်းလေးဖိသွင်းတာ အဆုံးထိဝင် သွားချိန်မှာတော့ ကျွန်တော် ခပ်တိုးတိုးလေး ညည်းညူမိပါတယ်။ အာ….နာလိုက်တာ…သူ့ကိုအပြင်ပြန်ထုတ်လိုက်ဖို့ကျွန်တော်ပြော လိုက်ပြီး သူဆွဲထုတ်မှာကို အသာငြိမ်ပြီးစောင့်လိုက်တယ်လေ။ နေမျိုးတစ်ယောက် သူ့ငပဲကို အဆုံးထိအပြင်ကိုဆွဲမထုတ်ဘဲ ထိပ်ပိုင်း လေးကို ချန်ကာ အထုတ်အသွင်းဖွဖွလေးလုပ်နေတာ အချိန်လေးနည်းနည်းကြာတော့ အံ့အားသင့်စဖွယ်ပါပဲ ကျွန်တော့်စိတ်တွေတင်း ထားတာလျော့သွားလို့လား ဒါမှမဟုတ် သူက အထာကျွမ်းနေလို့လားမသိ ပြန်ပြီးဖိသွင်းတာကို အလျားသင့် အနံသင့်ပြန်ပြီးလက်ခံ လိုက်နိုင်ပါပြီ။ နောက်ဆုံးတော့ တဆုံးကိုဝင်သွားတော့တာပါ။
`ကဲ….ပွဲစဖို့ တကယ်အသင့်ဖြစ်ပြီလား?’ နေမျိုးက ကျွန်တော့်နားရွက်နားကိုကပ်ပြီးပြောပါတယ်။
`အားလုံး မင်းအတွက်….ပြီးတော့ မင်းအတွက်ဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ်ကွ´ သူ့မျက်နှာမှာ နှစ်လိုသဘောကျစွာ အပြုံးတစ်ခုပေါ်လာပြီး နောက် သူ့ငပဲကို ခပ်ဖိဖိအဆုံးထိ တစ်ချက်သွင်းလိုက်ကာ အထုတ်အသွင်း မှန်မှန်လေးစလုပ်ပါတော့တယ်။ အာ….နာတာလည်းနာပါ တယ်…ဒါပေမဲ့ နာတာရဲ့အလွန် သာယာမိန့်မူးတဲ့ ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိတဲ့ ခံစားချက်တွေ တိုးတိုးပြီး ခံစားလာရရော။ ဘယ်လို…. ဘယ်လိုပြောရမှန်းလည်းမသိဘူး…..ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက တစ်ခုခုကို ဆာလောင်လာသလိုပဲ…တဖြည်းဖြည်းတိုးတိုးပြီး ဆာလောင် လာပါတယ်။ အရသာရှိတဲ့ ဟင်းပွဲလေးတစ်ပွဲကို ဆိုင်က ခင်းကျင်းပေးတာမှာ သူတို့ပေးတာထက်ပိုပြီးစားချင်တဲ့ ဆာလောင်မှုမျိုးနဲ့ သဘောတူမလားမသိပါဘူးဗျာ။
`ခပ်ပြင်းပြင်း…အား….မြန်မြန်လေးလုပ်ပေးကွာ…ငါမနေတတ်တော့ဘူး´ ကျွန်တော် အသက်ခပ်မြန်မြန်ရှူရှိုက်မှုတွေရဲ့ကြားအဲ့ဒီ စကားကို ပြောလိုက်မိပါတယ်။ သူကလည်း ကျွန်တော့်ပြောတဲ့အတိုင်း တဖြည်းဖြည်းတိုးတိုးပြီးလုပ်တယ်။ သူ့ရဲ့ဆောင့်သွင်းချက်တွေ ဟာ ကျွန်တော့် နှလုံးခုန်သံတွေ မြန်သထက်မြန်လာသလိုပါပဲ။ သူ့ရွှေဥတွေက ကျွန်တော့်ခရေ၀တွေကို ရိုက်ခတ်တဲ့အသံကိုတောင် ကြားရတယ်ထင်ပါရဲ့။ သူ့ကိုယ်လုံးတစ်ခုလုံး ချွေးစေးတွေပြန်စပြုလာပါပြီ…..သူ့မျက်နှာလေးဟာလည်း သွေးရောင်လွှမ်းစပြုလာသလို … သူ့မျက်လုံးတွေဟာလည်း မှေးမှိတ်ထားကာ အခုသူခံစားနေရသော အထိအတွေ့ အခိုက်အတန့်လေးတွေကို ကျေနပ်သာယာကာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ကာယနှီးနှောတဲ့ချစ်ခြင်းမှာ သဘောကျပုံပြဆိုနေတယ်ပေါ့နော်။ သူ့ပါးပြင်က ချွေးနံ့နဲ့အတူရောလာသော ကိုယ်သင်းနံ့လေးကိုတောင် ခံစားရရှိနေသလို မိန့်မူးမိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဆောင့်သွင်းချက် ခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်အပြီးမှာတော့ သူ့နှုတ်ဖျား က ခပ်အုပ်အုပ်အော်သံလေးတစ်ချက်ပေါ်လာကာ ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲကို ကော့ကော့ပြီး သူ့သုက်ရည်တွေကိုပစ်သွင်းလိုက်ပါတော့ တယ်။ သူ့ရဲ့ ချစ်စဖွယ် နှစ်သက်ဖွယ် အသွေးအသားတွေဟာ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ပျံ့နှံ့သွားသလိုပဲ ကျွန်တော့်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ခံစားလိုက်မိသလိုပါလေ။ ကျွန်တော်သည်လည်း စိတ်ထဲမှာ ရုတ်တရက်ဆိုသလို အမြင့်ဆုံးဆိုသည့်ခံစားမှုမျိုး သူနဲ့မရှေးမနှောင်းရလိုက် ကာ အိပ်ယာပေါ်ဝုန်းကနဲလဲကျပါရော။ ကျေနပ်သည်ဆိုသော ခံစားမှုအဟုန်ဟာ နှစ်ဦးသားအပေါ်လွှမ်းခြုံနေတာများ စကားမပြောနိုင် အတန်ကြာငြိမ်သက်နေမိကြတဲ့အထိဆိုပါတော့။ နေမျိုး သူ့ငပဲကိုအသာဆွဲချွတ် ကွန်ဒုံးကို အိပ်ယာဘေးက တစ်ရှူးဘောက်စ်က တစ်ရှူးအနည်းငယ်ကိုလှမ်းယူကာ ထွေးပတ်လိုက်ရင်း အမှိုက်ခြင်းလေးထဲချ ကျွန်တော့်နံဘေးကို အသာအယာလှဲအိပ်လိုက်ပါတယ်။
`မင်း…မင်းကြိုက်တယ်မဟုတ်လား?’ ရွှဲနေတဲ့အိပ်ယာခင်းပေါ်အသာလှဲရင်း နေမျိုးကမေးသေးတာပါ။ ကျွန်တော်ကလည်း `မင်းဘယ်လိုထင်လို့လဲ?’ သူ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကို ရယ်မောလိုက်ပြီးနောက် ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းများကို နမ်းရှိုက်ပါတော့တယ်။ သူ့လျှာဖျားများဟာ ကျွန်တော့်အာခံတွင်းအနှံ့ရောက်ရှိပြီး ကျွန်တော့်တို့နှုတ်ခမ်းခြင်းထိခတ်သံဟာ အသံတောင်ထွက်သလားပါပဲ။ ခဏနေတော့ သူ့လျှာကိုအသာဆွဲထုတ်လိုက်ရင်း ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းများကိုစိုက်ကြည့်ကာ ``မင်းကို ငါအရမ်းချစ်တယ် ညီညီ´တဲ့။ ကျွန်တော့် ရင်ထဲအသည်းထဲဝယ် တဆတ်ဆတ်ခါသွားရရင်း သူ့ကို အငမ်းမရပြန်နမ်းရှိုက်မိပါတယ်။ `ငါ..ငါလည်း မင်းကိုအရမ်းချစ် တာပဲ နေမျိုး….ရာ´
နှစ်ဦးသားရဲ့ပူပြင်းနေသောခန္ဓာကိုယ်တွေကို ရေပန်းအောက်မှာ အချိန်တော်တော်ကြာထားရင်း သန့်စင်လိုက်ကြပါတယ်။ နေမျိုးနှင့် ကျွန်တော် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြန်အလှန် သန့်စင်စေတယ်….ခြောက်သွေ့မွှေးပျံ့စေပါတယ်လေ။ သူ ကျွန်တော့်ကိုယ် အနှံ့ တဘက်နဲ့သုပ်ပေးနေရင်းမှာ နံရိုးနားက သွေးခြေဥတာလေးကိုအမြင်မှာတော့ ရပ်တန့်သွားပါတယ်။ သူ့မျက်ဝန်းမှာစိုးရိမ် သောအကြည့်တွေနဲ့အတူ `ဒါ ဒါ မင်းကိုဘယ်သူလုပ်ထားတာလဲကွ´မေးတယ်။ ကျွန်တော် သူ့လက်လေးကိုအသာဖယ်လိုက်ရင်း `ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာ….ငါချော်လဲထားလို့ထိထားတာ´လို့လိမ်လိုက်ပါရဲ့။ အခုလို ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေချိန်မှာ အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကို ကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး။ `ငါ…ငါ ချော်လဲထားတာ….´
`အမ်…ချော်လဲထားတာကလဲ လက်သီးပုံလိုလိုထင်းနေတယ် ကို့ကိုအမှန်ပြောစမ်းပါ Baby ရာ´
Baby လို့ခေါ်လိုက်သံလေးက ကျွန်တော့်ကို အရည်ပျော်သွားစေပါတယ်။ နေမျိုး သူ့လက်မောင်းအစုံနဲ့ ကျွန်တော့်ခါးကိုရစ်သိုင်းပွေ့ ဖက်လိုက်ရင်း `ကိုယ် ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ဘေဘီ့ကိုနာကျင်အောင် လုပ်ဖို့ခွင့်မပြုတော့ဘူးနော်၊ ဘယ်သူလုပ်တယ်ဆို တာလေးကို ပြောရုံလေးပဲပြောပြကွာ´ ကျွန်တော့်နားရွက်နားကို တကယ်တိုးတိုးလေးကပ်ပြောတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေက မျက်ရည်တွေ တလှိမ့်ချင်းစဆင်းရပါပြီ ဘယ်လိုမှ ထိန်းမရနိုင်ခဲ့ဘူးလေ…´ဖေ…အဖေက ထိုးထားတာ….အိုကေ? သူက တစ်ချိန်လုံး လိုလို အရက်သောက်နေတတ်တာလေ၊ သူ့စိတ်ထဲမှာ အလိုမကျရင် အကြောင်းပြချက်သိပ်မရှိဘဲ လက်သီးနဲ့ထိုးတာ၊ အဲဒါပဲ….ကြားရ တာ ဘယ်လိုနေလဲဟင်?’ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းများက မျည်ရည်ချောင်းစီးပါပြီ။ ကျွန်တော် ဒေါသတကြီးနဲ့ ရေချိုးခန်းနံရံကိုလက်သီးနဲ့ ထိုးပြီး ဒေါသပေါက်ကွဲဖို့ဟန်ပြင်တော့ နေမျိုးကလှမ်းဆွဲလိုက်ကာ သူ့ရင်ခွင်ထဲကို ဆွဲဖက်လိုက်ပါတယ်။ `ငါ အဲ့တာကို သိပ်မုန်းတာပဲ´
နေမျိုး ကျွန်တော့်ကို သူ့ရင်ခွင်ထဲဆွဲဖက်ထားချိန်မှာ ကျွန်တော် သူ့ရင်ခွင်ထဲခေါင်းတိုးဝှေ့ကာ အရှက်မသိငိုမိပါတော့တယ်။ သူ ကျွန်တော့်ကို ဖက်တွယ်ထားရင် ကျောပြင်ကိုပွတ်သပ်ကာ အဆင်ပြေသွားမှာပါ အဆင်ပြေသွားမှာပါကွာလို့ပြောပါရော။ ကျွန်တော့် စိတ်နဲ့ ခန္ဓာပင်ပန်းနေရတာ အနားရချင်ပြီ။ သူ့ရင်ခွင်ဟာ ကျွန်တော်နားခိုရာဖြစ်ပါရစေ။ သူ ကျွန်တော့်ကို တဘက်နှင့်ထွေးပတ်လိုက် ကာ ကျွန်တော့်ကိုပွေ့ချီပြီး အိပ်ခန်းထဲခေါ်ဆောင်ပါတယ်။ အိပ်ယာပေါ်ကိုလည်း သူအသာချရော ကျွန်တော် အိပ်မောကျသွားရော။
ကျွန်တော် ရုတ်တရက် နိုးလာတော့ ခုတင်ဘေးက နာရီကိုကြည့်လိုက်တာ ည ၉နာရီ ၃၇မိနစ်ဖြစ်နေပြီ။ ကောင်းကင်က အေးမြနေတဲ့ လရောင်ကလည်း မှန်ပြတင်းကတစ်ဆင့် အခန်းထဲကိုကျရောက်နေပါတယ်။ အိပ်ယာပေါ်ကထလိုက်တော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ရှင်းနေ တယ်လို့ ခံစားမိမှ ကိုယ့်ဖာသာအ၀တ်မကပ်မှန်းသတိရမိပါရဲ့။ ကျွန်တော့်အ၀တ်အစားတွေကို ကြည့်လိုက်တော့ ခုတင်ခြေရင်းက အ၀တ်တန်းမှာ ချိတ်တွေနဲ့ချိတ်ထားတာမြင်တာကြောင့် ၀တ်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ အခန်းတံခါးကို အသာဆွဲဖွင့်လိုက်တော့ လှေကားစီက အစားအစာအနံ့တွေကိုရရော။ ကျွန်တော် မရွံ့မရဲလှေကားကနေ တစ်ထစ်ခြင်းဆင်းလိုက်တော့ ကြားလာရတာက ဒယ်အိုးဆီက တဖျစ်ဖျစ်မြည်သံ….ကြော်လှော်သံတွေဟာ ပိုပိုကျယ်လာတယ်။ လှေကားအောက်ဆုံ့းထစ်အရောက်မြင်လိုက်ရတာက ဧည့်ခန်း… ပြီးတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာက မီးဖိုခန်း။ ကျွန်တော်လျှောက်လှမ်းသွားလိုက်တော့ ဘောင်းဘီတိုလေးပဲဝတ်ထားကာ အပေါ်က Apron လေးပတ်ကာ ချက်ပြုတ်နေသော နေမျိုးကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ ကြက်သား…ပြီးတော့ အသီးအရွက်တွေကို ချက်ပြုတ်ကြော်လှော် နေသလိုပဲ။ သူ ကျွန်တော့်ကို မော့ကြည့်ကာ ပြုံးပြလိုက်ရင်း မုန်လာဥနီကို လှီးချွတ်ပါတယ်။
`ကဲ…မင်း နောက်ဆုံးတော့လည်း နိုးထလာပြီပေါ့။ မင်း ကောင်းကောင်းအနားယူနိုင်တာကို ကိုယ်ဝမ်းသာပါတယ်ကွာ´
သူ့ကိုယ်ပေါ်က Apron ကိုချွတ်ကာ ခုံပေါ်တင်လိုက်ပြီးနောက် ကျွန်တော့်ကို အနမ်းပေးပါတယ်။
`ကိုယ် ….မင်းအတွက် သတင်းကောင်းလေး ရထားတယ် …မင်း….ကိုယ့်အခန်းမှာ Weekend တိုင်းနေလို့ရပြီ´
ကျွန်တော် သူ့ကို အမေးထုတ်တဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ သူလုပ်လက်စအလုပ်ကိုမလုပ်သေးဘဲ ` အာ…မစိုးရိမ်ပါနဲ့ကွာ… ကိုအားလုံးစီစဉ်ပြီးပါပြီ။ စကားမစပ်……မင်း တနင်္ဂနွေနေ့ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ပိုပြီးအံ့သြရဦးမှာ´တဲ့ပြောတယ်။
ကျွန်တော် သူ့ကိုကြည့်ရုံပဲကြည့်နေနိုင်ပါတော့တယ်။ သူ့ခါးအစုံကို ကျွန်တော်ထွေးဖက်ပြီးနောက် `ကို ဘာပဲပြောပြောပါ´ လို့တုန့် ပြန်လိုက်ပါရဲ့။
ကျွန်တော်တို့ အချစ်ပွဲကို ရက်သတ္တပတ်ရဲ့အဆုံးသတ်နေ့တွေမှာ အကြိမ်များစွာပြုလုပ်ကြပါတယ်။ ကြာရှည်လှသော အချိန်အတော အတွင်းကြီးမှာ အပျော်ရွှင်ဆုံးအချိန်တွေရခဲ့ပြီလို့ဆိုရမလားပါပဲ။
သူ ကျွန်တော့်အိမ်ကို ကားတန်းတန်းမတ်မတ်မောင်းပြီးလိုက်ပို့တယ်။ အိမ်ကိုလည်းရောက်ရော ဘယ်လို အံသြဖို့ကောင်းမယ့် Weekend ဖြစ်မလည်းလို့ သံသယတော့ဝင်ခဲ့မိပါတယ်။ ကျွန်တော် နေမျိုးကို နှုတ်ဆက်ပြီးနောက် အိမ်ထဲကို ခပ်ဖြေးဖြေး လျှောက်ဝင်လိုက်ရော။ အို….တစ်အိမ်လုံးလည်း သန့်ရှင်းတောက်ပြောင်နေတယ်။ ပြီးတော့ ဧည့်ခန်းထဲက ဆိုဖာပေါ်မှာ ငြိမ်ပြီး သတင်းစာဖတ်နေတယ်။ မမြင်ဖူးတဲ့လူတစ်ယောက်ကို မြင်လိုက်ရသလိုပါပဲလေ….သန့်ပြန့် ရှင်းသန့်နေတာများ အမွှေးအမျှင်တွေကိုရိတ်ပယ်….ရေမိုးချိုးပြီး မွှေးကြိုင်နေတာ။ သူ ကျွန်တော့်ကိုမြင်တော့ ရုတ်တရက်ထလာကာ ကျွန်တော့်ကို ထွေးဖက်ပါတော့တယ်။
`ဘာကိုလဲ ဖေဖေ´ ကျွန်တော် ဇဝေဇ၀ါဖြစ်မိတာပေါ့။ `ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ´
`အော်…ဖေဖေသားကို တောင်းပန်စကားပြောခဲ့တာပါကွာ။ သားမေမေသေဆုံးမှုကြောင့် ခံစားနေရတဲ့ ဒေါသတွေကို သားပေါ်မှာပုံချခဲ့ သလိုဖြစ်ခဲ့တာတွေအတွက်လေ။ အဲတာတွေဟာ ဖေဖေ့အမှားတွေပါပဲလေ။
သားမေမေ ဆေးရုံကိုစောပို့ဖို့ကောင်းတာကို အိမ်မှာပဲ ကုစေခဲ့တဲ့အတွက် သားမေမေသေဆုံးဖို့ဖြစ်သွားတာ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းသွားတာလေ။ အဲလိုခံစားမှုတွေကို သားအပေါ်ပုံချမိတယ်´ သူ့ခေါင်းကို ခပ်ဖွဖွသူ့လက်များနဲ့ ကိုင်လိုက်ရင်းပြောပါတယ်။
`ဖေဖေ´ `အဲဒါတွေအကုန်လုံးဟာ ဖေဖေ့အမှားမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဖြစ်ပျက်ချိန်တန်တာတွေ တိုက်ဆိုင်သွားလို့ပါဗျာ။ ကျွန်တော့်ကို နာကျင်အောင်လုပ်တာတွေအတွက်လည်း ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမထားပါဘူး။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဖေဖေသားကို တောင်းပန်စကား ဆိုကတည်းက ဖေဖေ့မေတ္တာကို ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။ သားကို ကတိပေးပါလား….အရင် ….ဖေဖေ ဟိုးအရင်မေမေရှိတုန်းကလိုပဲ လန်းလန်းဆန်းဆန်းတက်တက်ကြွကြွနေမယ်လို့လေ´
မေမေသေတဲ့အချိန်တုန်းကတည်းက မငိုခဲ့တဲ့ဖေဖေဟာ အခု စတင်ငိုကြွေးပါတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အသံမကျယ်ပါဘူး ခပ်တိုးတိုးရှိုက်သံ နှင့်အတူ မျက်ရည်တွေ တလှိမ့်ခြင်းကျဆင်းရုံပါပဲ။ `ဖေဖေ ဘယ်တော့မှ အရက်မသောက်တော့ဘူး´ ကတိစကားဆိုပါတယ်။ `ပြီးတော့ စီးပွားရေးကိုလည်း ဆထက်တိုးပွားအောင် ပြန်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်တော့မယ် ဟုတ်ပြီလား သား´
ဖေဖေ သူ့စကားသူတည်ပါတယ်။ ကျေနပ်ဖွယ်အလုပ်အကိုင်တစ်ခုကို သူပြန်လည်တည်ထောင်တယ် ကြိုးစားပါတယ်။ အိမ်လေးလည်း ပြန်လည် စိုပြေစပြုလာပါပြီပေါ့နော်။ နေမျိုး ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ သူ ဘယ်တော့မှ ကျွန်တော့်ကို မပြောပြပေမဲ့ အားလုံးအတွက် သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နှစ်ဖက်မိဘတွေ အားလုံးဟာ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသားရဲ့ပေါင်းသင်း ဆက်နွယ်မှုတစ်ရပ်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲ လက်ခံကြပါရဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ပြီးတော့ နေမျိုးရဲ့ ဘောလုံးအသင်း။ အစကတော့ အရမ်းကိုပဲစိုးရိမ်ခဲ့ကြတာပါပဲ….ဒါပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ခံပေးကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား ပညာရေး က ကောလိပ်စတုတ္ထနှစ်တောင်ရောက်လာပါရဲ့ နေမျိုးက ဥပဒေဘာသာရပ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော်ကတော့ ဆေးပညာကို ဘ၀အတွက် ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ တရားဝင်ချစ်သူ သက်တမ်းငါးနှစ်ကြာခဲ့ပေမယ့်လည်း လတ်ဆတ် နေဆဲ အချစ်တွေ ခိုင်မြဲဆဲပါလေ။
ကျွန်တော် ဒီလိုအမြဲပျော်ရွှင်ရတဲ့ ဘ၀လေးကိုရလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်လိုမှတွေးမထင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ….ဒါဟာ အိပ်မက်တစ်ခု မှန်ကန်လာခဲ့ ခြင်း……….။
Alex Aung (17 August 2014)
Posted by Alex Aung at 8:05 PM No comments:
လိင်တူချစ်သူတွေကြားထဲမှာ ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသိပညာ...
How to give him the best blowjob ever!